Yan Aung: February 2008
Playtagger လေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ဆီဘောက်စ်ထဲမှာ ဘလော့ဂါ ၀ိမုတ္ထိက မေးထားတာတွေ့လို့ အကြောင်းပြန်ကြားရင်းနဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖြစ်ပါတယ်. အရင်ကလည်း မိတ်ဆွေတစ်ချို့ကို ရှင်းပြခဲ့ဖူးပါတယ်. အားလုံးသိအောင် ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ သီချင်းလေးတွေ တင်တဲ့အခါမှာ Music Player အမျိုးမျိုး သုံးပြီး တင်တတ်ကြပါတယ်. ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ သုံးလို့ကောင်းတဲ့ ပလေယာလေးတစ်ခုကို ပြောချင်လို့ပါ.
ဥပမာ သိချင်ရင် ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ဘေးနားက တင်ထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေကို ကြည့်ပါ. Play Button လေးကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ သီချင်းလေးတွေ နားဆင်နိုင်သလို Right Click ခေါက်ပြီးတော့လည်း Save လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်.
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ အောက်ပါစာကြောင်းလေးကို ကူးယူပြီး </head> Tag လေး မဆုံးခင်နားမှာ ထည့်ပေးလိုက်ပါ.
ပို့စ်ထဲမှာ သီချင်းတင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါပုံစံလေးကို အသုံးပြုပါ.
<a href= “your songs URL”>My Song</a>
ပစ်မခွာရက်မို့၊ အို.. ချစ်တတ်ပြီ။
(ညည်းချင်း) .......................... (ရေခဲငှက်)
လမ်းလျှောက်တတ်သောသစ်ပင်နှင့် အတောင်ပံမရှိသော တေးသီငှက် (၅)
မနက်ခင်း အရုဏ်မလင်းခင်မှာ သစ်ပင်လည်း ငှက်ကလေးကို စိတ်ထဲကပဲ နှုတ်ဆက်ခဲ့ရင်း သူလာကြောင်း သိစေဖို့ သူ့ရင်ဘတ်ထဲက သစ်သီးလေးတစ်လုံးကို ငှက်ကလေးရဲ့ ခြံတံခါးဝမှာ ချိတ်ဆွဲထားခဲ့တယ်…
ပြီးတော့ သူနေတဲ့နေရာကို ခပ်မြန်မြန်ပဲ လမ်းလျှောက်ပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်.
လမ်းမှာတော့ ငှက်ကလေးအကြောင်းကိုပဲ တစ်လမ်းလုံးစဉ်းစားနေခဲ့တာပေါ့.
လမ်းလျှောက်လိုက်၊ ပင်ပန်းရင် ခဏနားလိုက်နဲ့ သစ်ပင်လည်း သူနေထိုင်တဲ့ နေရာလေးဆီကို မိုးမသောက်ခင်မှာပဲ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်..
ခါတိုင်းလိုပဲ ကြည်လင်ရွှင်ပျစွာနဲ့ ငှက်ကလေး နိုးထလာခဲ့ပါတယ်.
အတောင်ပံတွေကိုဆန့်ထုတ်လို့ နံနက်ခင်းရဲ့ နေရောင်ခြည်ကို ငှက်ကလေး ခံစားနေခဲ့ပါတယ်. မျက်လုံးလေးကိုလည်း မှိတ်ထားခဲ့တာပေါ့. သူ့အာရုံထဲမှာ သစ်ပင် ဒီအချိန်ဆို ဘာလုပ်နေမလဲလို့ တွေးနေမိခဲ့တယ်. တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ငှက်ကလေးဟာ တစ်စုံတစ်ရာကို နားစွင့်နေခဲ့မိတယ်…
ငှက်ကလေးရဲ့ အိမ်လေးဘေးမှာ စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ တောလမ်းလေးတစ်ခု ရှိတယ်. အဲဒီ့လမ်းလေးဘေးမှာ ခရေပန်းလေးတွေ၊ တောပန်းဝါ၀ါလေးတွေ ဖူးပွင့်နေတတ်ကြတယ်. ငှက်ကလေးက နှင်းဆီတွေ၊ သဇင်ပန်းတွေထက် အဲသလို တောလမ်းကလေးဘေးက ပန်းကလေးတွေကို ပိုမြတ်နိုးတတ်တယ်လေ.
တောပန်းဝါ၀ါလေးတွေကလည်း ငှက်ကလေး အလာကို နေ့တိုင်း မျှော်နေတတ်ကြတာပဲ. အဆင့်အတန်းမခွဲခြားဘဲ သူတို့အပေါ်ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းတွေ ပြသတတ်တဲ့ ငှက်ကလေးကို သူတို့တွေကလည်း ချစ်ကြတယ်. ဒါကြောင့် ငှက်ကလေး နိုးထလာတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ တောပန်းလေးတွေဟာ ဖူးပွင့်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေတတ်ကြတယ်.
ကြည်လင်အေးမြတဲ့ စမ်းချောင်းလေးထဲမှာ ငှက်ကလေး ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီးတော့ အ၀ါရောင် တောပန်းလေးတစ်ချို့ကို ခူးဆွတ်ပန်ဆင်လာခဲ့တယ်. သူမ ကြားနေကျ အသံလေး ဒီနေ့ ကြားရနိုင်ပါ့မလားလို့လည်း ဘေးဘီဝဲယာကိုကြည့်ရင်း နားထောင်နေခဲ့မိတယ်.
တောင်စွန်းလေးတစ်ခုနား အရောက်မှာ ငှက်ကလေး တုံ့ခနဲ ရပ်လိုက်တယ်. အဲဒီ့အပေါ်ကနေ ရပ်ကြည့်ရင် ရေတံခွန်လေးတစ်ခုစီးနေတာကို မြင်ရသလို၊ သစ်ပင်ပန်းမာန်တွေနဲ့ စိမ်းလန်းဝေဆာနေတဲ့ တောင်ကြားလေးတစ်ခုကိုလည်း တွေ့နိုင်တယ်လေ.
သူမရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေကို မှေးမှိတ်လို့ အတောင်ပံလေးနှစ်ခုကို ယှက်ကာ ကောင်းကင်ပြင်ကို မော့ကြည့်ရင်း တစ်စုံတစ်ရာကို တိုးတိုးလေးရေရွတ်လိုက်ခဲ့တယ်.
ပြီးတော့ တောင်ကြားလေးထဲကို မမှိတ်မသုန် စိုက်ကြည့်နားစွင့်နေခဲ့တယ်.
“ချွင်….. ချလွင်… ချလွင်…”
ကြည်လင်အေးမြတဲ့ ခေါင်းလောင်းသံလေးတစ်ခု တောင်ကြားလေးထဲက လွင့်တက်လာခဲ့တယ်.
ငှက်ကလေး ကျေနပ်အားရစွာ ရယ်မောလိုက်ခဲ့တယ်. ရယ်မောနေတဲ့ ငှက်ကလေးရဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေထဲမှာတော့ အဆွေးရိပ်တွေက မဖုံးနိုင်မကွယ်နိုင် ဖြစ်နေခဲ့တယ်လေ.
ငှက်ကလေးက တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်ခဲ့ပါတယ်.
ခြံတံခါးဝအရောက်မှာ ငှက်ကလေး အရမ်းကို ပျော်သွားခဲ့တယ်..
အသည်းပုံ သစ်သီးလေးက သူမကို စောင့်ကြိုနေခဲ့လို့လေ…
ဘာလို့ ငါ့အပေါ် ဒီလောက်ကောင်းနေရတာလဲဟင်…
အဲဒီ့နေ့က စားလိုက်တဲ့ သစ်သီးလေးဟာ သူမစားခဲ့သမျှ သစ်သီးလေးတွေထဲမှာ အချိုမြိန်ဆုံး ဖြစ်နေခဲ့မယ် ဆိုတာကိုတော့ ပြောပြနေစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်လေ…
ငှက်ကလေးလည်း အိမ်ထဲကို ပြန်ဝင်လို့ မိုးမ၀င်ခင် သူမ နေတဲ့ အိမ်ကလေးကို ပြုပြင်မွန်းမံဖို့ ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်.
သစ်ပင်ကို သတိရမိပေမယ့် သူမမှာ အချိန်တွေ အရမ်းနည်းနေတာကြောင့် လွမ်းတဲ့စိတ်ကို ကြိုးစားမေ့ဖျောက်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်..
သစ်ပင်မှာတော့ ငှက်ကလေး မလာနိုင်ဘူးဆိုတာ သိပေမယ့် မျှော်လင့်နေမိဆဲပါ.
လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ်လိုက်၊ ဟိုးအဝေးက မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းဆီကို လှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်နဲ့ သစ်ပင်ဟာ ဘာကိုမှ အာရုံစူးစိုက်လို့ မရဘူး ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်.
ငှက်ကလေးကိုပေးချင်တဲ့ အသည်းပုံသစ်သီးလေးတွေလည်း သစ်ပင်ရဲ့ အခန်းထောင့်မှာ နေရာယူလို့ သူု့ကို ပြောင်လှောင်နေကြတယ်လေ…
ဘယ်တော့များမှ ငှက်ကလေးရဲ့ လက်ထဲကို ထည့်ပေးခွင့် ကြုံမှာလဲ ဆိုတာကိုတော့ သူုကိုယ်တိုင် မဖြေကြားနိုင်ခဲ့ပါဘူး..
ထူးထူးခြားခြား. သူ့သစ်ကိုင်းမှာ လိပ်ပြာငယ်လေးတစ်ကောင် လာနားနေပါလား...
ဒါမှမဟုတ် ပရလောကသား တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်မှုလေလား…
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သစ်ပင်ရဲ့ ဘ၀မှာ အဲသလို လိပ်ပြာငယ်လေးတစ်ကောင် လာနားတတ်တိုင်း ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေ ရတတ်တယ်လေ…
မင်းလုပ်ချင်တာလေးတွေ၊ ဖြစ်ချင်တာလေးတွေလည်း အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေ…
မင်းလာမယ့်နေ့ရက်လေးတွေကို ငါစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်နေပါမယ်.
သစ်ပင်မျက်လုံးလေးမှိတ်လို့ ကောင်းကင်ကို တိုင်တည်ရင်း အဲသလို ဆုတောင်းနေခိုက်မှာပဲ သူ့သစ်ကိုင်းတွေ အကုန်လုံး လေမတိုးဘဲ အသံတွေ တရှဲရှဲ ထမြည်ပါတယ်.
သစ်ပင် သတိထားနေမိခိုက်မှာပဲ ခပ်လှမ်းလှမ်းတောအုပ်လေးထဲကနေ အသံလေးတစ်သံ လွင့်မျောလာတာကို ကြားလိုက်ရပါတော့တယ်.…
“ချွင်…. ချလွင်… ချွင်…. ချွင်… …. …”
ငါမင်းကို သိပ်လွမ်းသလို စိတ်လည်းပူမိတယ်.
မင်းပြန်လာမှ ငါ့ရဲ့ လွမ်းတဲ့စိတ်တွေ အကြောင်း ပြောပြချင်သေးတယ်.
ငါ မင်းကို လွမ်းနေပြီ ငှက်ကလေးရယ်…
မင်းကို ဘယ်လောက်ထိချစ်မိသွားမှန်း ငါကိုယ်တိုင်တောင် မသိမိတော့ပါဘူး..
မင်းကို တွေ့ရဖို့ ငါစိတ်ရှည်ရဦးမှာပေါ့နော်..
ချစ်သူကို ကိုယ်ဘယ်လောက်တောင် ချစ်မိသွားလဲ
ချစ်သူရဲ့အသံကို ကြားရဖို့ဆိုတာလည်း မလွယ်လှပါဘူး
ဟေလီကြယ်တံခွန်ကို ၇၆ နှစ်ကြာမှ တွေ့ရမယ်ဆိုရင်တောင်
ချစ်သူဘက်က ကြားစေချင်မှ ကြားနိုင်တာမို့ပါ.
သေသေချာချာ ပြန်ကြည့်မှ သတိရ
ငါက အထဲမှာရပ်လို့ စက်ဝိုင်းကိုဆွဲခဲ့တာကိုး…
ဆီးကန့် မျဉ်းတစ်ကြောင်း ငါ့ရဲ့ ရင်ခွင်ကို လာခွဲတယ်.
ငါ ညင်သာစွာနဲ့ပဲ ထွက်ခွာသွားချင်တယ်.
ကော့ဒ်လေးတစ်ကြောင်း ငါ့နှုတ်ခမ်းကို လာနမ်းတယ်.
မင်းရဲ့ အဆုံးသတ်က ဘာလဲ.
ကော့ဒ်လေးရဲ့ အစဟာ စက်ဝိုင်းရဲ့ တစ်ဖက်ဖြစ်ပြီး
သူ့အတွက် အကြီးမားဆုံး အခွင့်အရေးဟာ
သူဟာ စက်ဝိုင်းထဲက လွန်မြောက်သွားနိုင်သူမှ မဟုတ်တာ.
စက်ဝိုင်းထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မျဉ်းတစ်ကြောင်းသာ ဖြစ်ခဲ့တယ်.
နောက်ထပ်စက်ဝိုင်းတစ်ခု ငါ့ရဲ့ ကမ်းစပ်ကို လာထိတယ်.
မင်းကရော နောက်ထပ် စက်ဝိုင်းတစ်ခုပဲမလား
တန်းဂျင့်မျဉ်းတစ်ကြောင်း ငါ့ရဲ့ ပါးပြင်ကို လာနမ်းတယ်.
သူက ငါ့ရင်ခွင်ကိုလည်း မခွဲဘူး
စက်ဝိုင်းထဲမှာ ပိတ်မိနေသူလည်း မဟုတ်ဘူး
နောက်ထပ် စက်ဝိုင်းတစ်ခုလည်း မဟုတ်ခဲ့ဘူး
အနားသတ်တလျှောက် အရှိန်ယူပြီး ငါပြေးခဲ့တယ်.
ငါဟာ ညင်သာစွာနဲ့ပဲ လမ်းကြောင်းကူးပြောင်းခဲ့ပြီ.
ဟိုဖက်မှာ ပြန်ဆုံကြမယ်နော် ချစ်သူ…
ဆီးကန့် = Secant
ကော့ဒ် = Chord
ဒိုင်ယာမီတာ = Diameter
တန်းဂျင့် = Tangent
စက်ဝိုင်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အမှတ်နှစ်ခုကို ဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ မျဉ်းပိုင်းကို ကော့ဒ်လို့ ခေါ်ပါတယ်. မြန်မာလိုတော့ “လေးကြိုး” လို့ခေါ်ပါတယ်.
A segment that connects two distinct points onacircle is calledachord.
စက်ဝိုင်းရဲ့ ဗဟိုကို ဖြတ်ကျော်သွားတဲ့ ကော့ဒ်ကိုတော့ ဒိုင်ယာမီတာ (အချင်းမျဉ်း) လို့ ခေါ်ပါတယ်.
A chord that passes through the center ofacircle is calledadiameter.
စက်ဝိုင်းကို အမှတ်နှစ်ခုမှာ ဖြတ်သွားတဲ့ မျဉ်းကြောင်းကိုတော့ ဆီးကန့်လို့ခေါ်ပါတယ်. မြန်မာလိုပြောရရင်တော့ မျဉ်းဖြတ်ပါ. ၀န်းဖြတ်မျဉ်းလို့လည်း မြန်မာလို ပြောတတ်ကြပါသေးတယ်.
A line that intersects with the circle at exactly two points is calledasecant (line).
မျဉ်းကွေးကို ဖြတ်ကျော်သွားခြင်း မရှိဘဲ အမှတ်တစ်မှတ်မှာ ထိနေတဲ့ မျဉ်းကြောင်းကို တန်းဂျင့်မျဉ်းလို့ ခေါ်ပါတယ်. မြန်မာလိုနီးစပ်အောင်ပြန်ရရင်တော့ “၀န်းထိမျဉ်း” လို့ ဆိုကြပါတယ်.
A line that touchesacurve atapoint without crossing over is calledatangent (line).
ဆို့နင့် လွမ်းမောစွာ ငေးကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်
အဝေးက ချစ်သူကို သတိရရင်း
ချဉ်းနင်း ၀င်ရောက်လာမယ့် အရုဏ်ဦးကို
မှုန်ရီနေတဲ့ အလွမ်းတွေနဲ့ ကြိုဆိုခဲ့ရတယ် ချစ်သူရယ်..
မြတ်နိုးမိတဲ့ နှလုံးသားကို အပြစ်မတင်နိုင်စွမ်းတော့လည်း
လွမ်းတယ်ဆိုတာ အချစ်စစ်ပွဲအတွက် လောင်စာတစ်ခုလို ဖြစ်လာခဲ့တယ်
လွမ်းမောဖွယ် ညလေးတွေ အကြောင်း
ငါသိပ်ချစ်တဲ့ မင်းကိုထာဝရ ထွေးပွေ့ထားချင်တယ်
ဝေဒနာဆိုတာ လုပ်ယူနေစရာ မလိုပါဘူး
မရေရာတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ စောင့်ကြိုနေကြဆဲမို့
မျက်တွင်းတွေ နက်စေတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ
ဒီညလည်း လသာဆဲပါ ချစ်သူ…
လမ်းလျှောက်တတ်သောသစ်ပင်နှင့် အတောင်ပံမရှိသော တေးသီငှက် (၄)
သစ်ပင်ရဲ့ ငှက်ကလေးအပေါ် ထားရှိတဲ့ မေတ္တာဟာ တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးပွားနက်ရှိုင်းလာခဲ့သလို ငှက်ကလေးရဲ့ သစ်ပင်အပေါ် ထားတဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးဟာလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တိုးပွားလို့ အထပ်ထပ် ရစ်နှောင်မိခဲ့ကြတယ်.
အဲဒီ့နေ့က မိုးတွေ သည်းခဲ့တယ်….
မိုးရေတွေထဲမှာ သစ်ပင်ရယ်လေ ငှက်ကလေး အလာကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့မိတယ်.
မိုးတွေ လေတွေကြားထဲမှာ သစ်ပင် တစ်စုံတစ်ခုကို မသဲမကွဲ လှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်.
သူ့ရင်ဘတ်ထဲက အသည်းပုံသစ်သီးလေးကို အဆင်သင့်လုပ်ထားရင်း ငှက်ကလေးအလာကို စောင့်နေခဲ့တာပေါ့.
ဩော်… တစ်ခြားငှက်ကလေးတစ်ကောင် မိုးလာခိုတာပါလား…
ဖြူစင်စွာ ပြုံးပြလိုက်ပြီး သူနားခိုဖို့ တစ်နေရာ ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်.
သူ့အတွက် တစ်စုံတစ်ရာကို အမှန်တကယ် လိုအပ်နေခဲ့သလို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပေးစွမ်းနိုင်နေခဲ့တာကိုး…
တစ်နေ့ကျရင်တော့ မင်းငါ့အရိပ်မှာ ခိုနားသွားခဲ့ဖူးတာလေးကို ထောက်ပြီး ငါ့အကြောင်းတွေ မကောင်းမပြောရင် ပြီးတာပါပဲ.
အင်း… ဒါဆိုရင်လည်း ငါ့ထိုက်နဲ့ ငါ့ကံပဲပေါ့ကွာ…
လောလောဆယ် မင်းအရိပ်လိုတယ်မဟုတ်လား.. ယူပါ. ခိုနားပါ. စားသုံးပါ ငှက်ကလေးရေ…
ငါကတော့ ငှက်အမျိုးအမည်မခွဲခြားတတ်ပါဘူး. ငါ့မှာ ရှိတာ ပေးချင်ပါတယ်.
ငါ့ရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက အသည်းပုံသစ်သီးလေးက လွဲလို့ ကျန်တာ စိတ်ကြိုက်ယူငင် သုံးစွဲပါ အမျိုးအမည်မသိရတဲ့ ငှက်ကလေးရေ…
သစ်ပင်လည်း သူသိပ်ချစ်တဲ့ ငှက်ကလေးအလာကို စောင့်နေခဲ့ရင်း ပင်ပန်းလွန်းလို့ အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်.
ခဲလုံးတစ်လုံး သစ်ပင်ခေါင်းပေါ်ကို ပြုတ်ကျသလို ခံစားလိုက်ရတယ်.
တစ်စုံတစ်ယောက် သူ့ရဲ့ တံခါးကို လာခေါက်နေတယ်.
သစ်ပင်လည်း ၀မ်းသာအားရနဲ့ ပ်ိတ်ထားခဲ့တဲ့ တံခါးလေးကို ဖွင့်လိုက်တော့ အခန်းတံခါးဝမှာ သူရယ်လေ…
အတောင်ပံလေးတွေ မိုးစိုနေလို့ ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် ချမ်းနေရှာတယ်.
သစ်ပင်ရင်ထဲမှာ ကရုဏာစိတ်တွေ လျှံကျသွားခဲ့တယ်.
“မင်း. ငါ့ဆီကို ဖြစ်အောင် လာတယ်နော်. ငါ ဘယ်လို ၀မ်းသာမှန်းမသိဘူးကွာ.”
ငှက်ကလေးလည်း ဘုဆတ်ဆတ်နဲ့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်.
“လာချင်လို့လာတာမဟုတ်ပါဘူး. ကတိပေးထားပြီးမှ ပျက်သွားမှာစိုးလို့”
အဲလိုပြောပြီး ငှက်ကလေးလည်း သစ်ခေါင်းလေးထဲကို လှမ်းဝင်လိုက်ခဲ့တယ်.
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ သစ်ပင်လည်း ငှက်ကလေးအတွက် ရေသုတ်ဖို့ အပြာရောင်ပုဝါလေးတစ်ထည် လှမ်းပေးလိုက်တယ်.
“ကော်ဖီသောက်မလား. ကိုယ် ကော်ဖီကောင်းကောင်း ဖျော်တတ်တယ်.”
“နုိုး. ကော်ဖီဆို မကြိုက်. တစ်ခြားဟာဆို သောက်မယ်. ”
“ဩော်. သူပဲ. ကော်ဖီသောက်တိုင်း တစ်စုံတစ်ယောက်ကို လွမ်းတယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးတယ်လေ. မသောက်ချင်ပါဘူး. ကိုယ့်ဖာသာပဲ လွမ်းချည်တော့.”
သစ်ပင်လည်း တစ်စုံတစ်ရာကို သတိရသွားခဲ့ပြီး တစ်ချက်ငြိမ်ကျသွားခဲ့တယ်.
သူ့ခေါင်းကို တစ်ချက် ခါထုတ်လိုက်ပြီး…
“ဒါတွေက ပြီးခဲ့ပါပြီကွာ. ပြီးခဲ့ပါပြီ.”
ငှက်ကလေးလည်း သစ်ပင်ဘာဆက်ပြောမလဲလို့ စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်လေ.
အဲသလိုပြောရင်း ငှက်ကလေးကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သစ်ပင်ကို ခေါင်းမော့ကြည့်နေတာ တွေ့လိုက်ရတယ်.
ငှက်ကလေးက စိတ်မရှည်သလို လှမ်းပြီးပြောလိုက်တော့မှ သစ်ပင်လည်း သတိပြန်ဝင်သွားခဲ့တယ်.
ငှက်ကလေးလည်း ကျေနပ်သလို ပြုံးရင်း ကြမ်းပြင်ကို အကြောင်းမဲ့ စိုက်ကြည့်နေခဲ့ပြန်တယ်လေ.
သစ်ပင်ဘာတွေဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို သူမသိဘဲ နေမလား…
“ငှက်ကလေးရေ. ငါမင်းကို တစ်နေ့မတွေ့ရရင် မနေနိုင်အောင်ကို ဖြစ်နေမိပြီကွာ. အဲဒါ ဘာလို့လဲ မင်းသိလား”
ငှက်ကလေးလည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မေးကလေးကို ဆတ်ခါ..
ငှက်ကလေးလည်း ပြုံးနေရာက တစ်ခြားဖက်ကို မျက်နှာလေး လှည့်သွားခဲ့ပြန်တယ်.
“ပြောပြီးပြီပဲ သစ်ပင်ရယ်… ခင်ပါ… ခင်တာကောင်းပါတယ်. သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်က အခိုင်မြဲဆုံးပဲလေ. ခင်ပါနော်. မချစ်ပါနဲ့.”
သစ်ပင်လည်း နံရံကို လက်သီးနဲ့ တစ်ချက်ထောက်ထားလိုက်ပြီး နောက်ဖက်ကို လှည့်မကြည့်ဘဲ မေးတယ်.
“မင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာလို့ ညာနေရတာလဲကွာ…”
သစ်ပင်ရဲ့ မချိတင်ကဲ အသံကို ကြားလိုက်ရတော့ ငှက်ကလေး အလန့်တကြား လှည့်ကြည့်မိခဲ့တယ်.
“ငါပြောခဲ့ပြီးပြီပဲ သစ်ပင်ရယ်… ငါ့မှာ အခွင့်မရှိပါဘူး. ငါ့ကို နားလည်ပါကွာ.”
သစ်ပင်လည်း အံကို တင်းတင်း တစ်ချက်ကြိတ်ရင်း ငှက်ကလေးဖက်ကို လှည့်မကြည့်ဘဲ သူ့ရှေ့တည့်တည့်ကို စိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်.
“ဒီလောက် မိုးတွေလေတွေ သည်းထန်နေချိန်မှာ ငါမင်းဆီကို ဘာဖြစ်လို့ လာခဲ့သလဲ.
ဒီလောက် ငါ့အတွက် အန္တရာယ်များတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာကို ဘာဖြစ်လို့ ငါစွန့်စားနေခဲ့သလဲ..
မင်းတွေးကြည့်ပါ သစ်ပင်ရယ်. မင်းတွေးကြည့်လိုက်စမ်းပါ…”
“ငါသိပါတယ်ကွာ. အဲလိုခနဲ့သလို လေသံနဲ့ မပြောစမ်းပါနဲ့. ငါသိချင်တာက၊ ပြောရရင်ကွာ. ငါကြားချင်တာက မင်း ငါ့ကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ ၀န်ခံချက်တစ်ခုပဲ. အဲဒါကို ငါ အတိအလင်း ကြားချင်တယ်. သိချင်တယ်. ရှေ့လည်း ဆက်မတိုးဘူး. နောက်လည်း ဆုတ်မှာ မဟုတ်ဘူး. မင်းရဲ့ အဲဒီ့စကားတစ်ခွန်းတည်းနဲ့တင် ငါ အရာရာကို ရင်ဆိုင်ရဲတယ်.”
ငှက်ကလေးက ဟတ်ခနဲ တစ်ချက်ရယ်လိုက်ရင်း…
“သစ်ပင်ရယ်… မင်း ငါ့ဆီက တွယ်တာမှုတွေ၊ သံယောဇဉ်တွေ၊ အားကိုးယုံကြည်မှုတွေ ရနေခဲ့ပြီပဲ… ငါ့ကို အကျဉ်းအကျပ်ထဲ ဘာလို့ ပို့ချင်နေရတာလဲကွာ.”
“ငါ့အတွက် မင်းနဲ့ နီးစပ်ဖို့ ကြိုးစားပိုင်ခွင့် ရှိမရှိ သိချင်တယ်… တစ်ခွန်းပဲ ပြော…”
သစ်ပင်က အဲလိုလည်း မေးလိုက်ရော ငှက်ကလေးလည်း မျက်နှာကျက်ကို မော့ကြည့်လိုက်ရင်း ရီဝေတဲ့ မျက်လုံးလေးတွေနဲ့ သစ်ပင်ကို ပြန်ပြောခဲ့တယ်..
“မင်းမှာ အခွင့်အလမ်း ရှိမရှိ ဆိုတာထက် ငါကိုယ်တိုင်ကိုက ငါ့ရဲ့ ကတိနဲ့သစ္စာကို အလဲအထပ်မလုပ်နိုင်တာ ဆိုရင် ပိုမှန်မယ် သစ်ပင်… ”
“တကယ်ဆို ငါဟာ ဘ၀တစ်ခုကို သတ်မှတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ငှက်တစ်ကောင်ပါ. ဒါပေမယ့် ဘ၀က သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတောင်ပံ မရှိတဲ့ ငှက်ငယ်တစ်ကောင် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်. ဒါကို မင်းနားလည်ပါ. နားလည်ပါ သစ်ပင်ရာ…”
သစ်ပင်လည်း ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ဘဲ သူ့သစ်ကိုင်းလေးတွေကို လှုပ်နေခဲ့တယ်. ပြီးတော့ ငှက်ကလေးကို နှမျောတသခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်လျှမ်းနေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်နေခဲ့ပြန်တယ်.
ငှက်ကလေးလည်း ဒီတစ်ခါတော့ သစ်ပင်ရဲ့ အကြည့်တွေကို မလွှဲဖယ်တော့ဘဲ အားကိုးယုံကြည် မြတ်နိုးသက်ဝင်ခြင်းများစွာဖြင့် ပြန်ကြည့်နေခဲ့တယ်.
သစ်ပင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်လာခဲ့ပြီး သံစဉ်ချိုလေးတစ်ပုဒ် ငှက်ကလေးထံကို လွင့်စဉ်လာခဲ့တော့တယ်လေ…
ရင်ထဲက စွဲခဲ့တယ် မဏိစန္ဒာ။
ဩော်… ဓားထိကာ အသေသတ်ရင်လည်း
ခံရမယ် သေအချာ သိပေမယ့်
မိုးတွေလေတွေ စဲသွားပြီး ငှက်ကလေး ပြန်သွားတော့ သစ်ပင်တစ်ပင်တည်း ကောင်းကင်ပြာကြီးအောက်မှာ လွမ်းကျန်ရစ်ခဲ့တယ်.
ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ငှက်ကလေးက မပြန်ခင် ပြောသွားခဲ့တယ်လေ…
သူ နောက်နှစ်ပတ်လောက် သစ်ပင်ဆီကို လာနိုင်မယ် မထင်ဘူးတဲ့. သူ့အိမ်လေးကို မိုးမ၀င်ခင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမှာမို့လို့တဲ့လေ…
သစ်ပင်လည်း တစ်စုံတစ်ရာကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်.
အဲဒီ့နေ့က တစ်နေ့လုံး သူ့ရဲ့ အမြစ်တွေကို အစမ်းလှုပ်ကြည့်နေခဲ့တယ်.
ညရောက်တော့ အားလုံးတိတ်ဆိတ်အိပ်မောကျသွားတဲ့ အချိန်မှာ လရောင်အောက်မှာ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ သစ်တစ်ပင်ကို ကောင်းကင်ပြင်က လမင်းကြီးက တအံ့တဩ ငေးကြည့်နေခဲ့တယ်လေ….
အဲဒီ့ညက သစ်ပင် လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တာကတော့ ငှက်ကလေးနေတဲ့ အိမ်လေးဆီကိုပဲပေါ့…
မြစ်တွေချောင်းတွေကို ကျော်ဖြတ်လို့၊ တောင်တန်းတွေ၊ ချောက်ကမ်းပါးတွေကို ဖြတ်သန်းလို့ ငှက်ကလေးနေတဲ့ အိမ်လေး ရှိရာဆီကို သစ်ပင် မလျှော့တဲ့ဇွဲနဲ့ လမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ်.
အိပ်မောကျနေတဲ့ ငှက်ကလေးရဲ့ အခန်းခေါင်းရင်းနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ နေရာယူလိုက်ရင်း သစ်ပင်ဟာ သူ့ရဲ့ သစ်ကိုင်းလေးတွေ၊ သစ်ရွက်လေးတွေကို လှုပ်ခတ်လို့ ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ပဲ ကြားသိနားလည်နိုင်မယ့် သံစဉ်သီချင်းလေး တစ်ပုဒ် သီကျူးခဲ့လိုက်တယ်….
နတ်သမီးလေး (၁၄) ပါးက သစ်ပင်နားမှာ ကခုန်လို့ ချစ်ခြင်းသံစဉ်ကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုနေခဲ့ကြတယ်…
လမင်းကြီးကလည်း ကောင်းကင်ပြင်မှာ ပြိုင်ဖက်မရှိ ထွန်းလင်းတောက်ပလို့ သစ်ပင်ရဲ့ မေတ္တာတော်တေးကို အားဖြည့်သီကြွေးနေခဲ့တယ်လေ…
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးတွေ၊ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်လေးတွေထဲမှာ Scroll Box လေးတွေ ထည့်နည်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်.
အရင်ဆုံး ဒါလေးကို မလေ့လာခင် Scroll box လေးတွေ ဆိုတာ ဘာလဲ. ဘယ်လိုနေရာမှာ အသုံးဝင်နိုင်သလဲ ဆိုတာလေးကို အရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကြရအောင်.
ခင်ဗျားက စာပိုဒ်အရှည်ကြီးတစ်ခုကို အကိုးအကားအနေနဲ့ ပြချင်တယ်. အကုန်လုံးကို ရိုက်ပြလိုက်ရင်လည်း ခင်ဗျားရဲ့ ပို့စ်က အရှည်ကြီး ဖြစ်သွားမယ်. အဲလိုမျိုးဆိုရင် ခင်ဗျားပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကေ၀၀ါးသွားမယ်. ခင်ဗျားလုပ်ချင်တာက အဲဒီ့ အကိုးအကား စာပိုဒ်လေးကို ထည့်ပေးထားပြီး စာဖတ်သူက ဖတ်ချင်ရင် Scroll Down/Up လုပ်ပြီး ဖတ်၊ တကယ်လို့ ဓာတ်ပုံတွေ အများကြီး တင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဒီလို Scroll box လေးထဲ ထည့်ပြီး ပြထားလိုက်ရင် ဓာတ်ပုံ အယ်လ်ဘမ် တစ်ခု ပုံစံမျိုးလေး ဖန်တီးလို့ရမယ်၊ စာဖတ်သူက ပုံတွေကို သူလိုသလို၊ ကြိုက်သလို Scroll Down/Up လုပ်ပြီး ကြည့်. ဒါမျိုးပေါ့ဗျာ.
အဓိကကတော့ Space ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကျုံ့လိုက်ပြီး ပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို သိသာ ထင်ရှားအောင် လုပ်ပေးတာပါပဲ.
ကဲ. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတော့ ဒီလိုလုပ်ပါ ခင်ဗျာ…
အခု ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ့် Coding လေးကို လေ့လာကြည့်ပါ.
Your Text Here ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်တင်ပြချင်တဲ့ စာပိုဒ်လေး၊ ဓာတ်ပုံ စတာတွေကို ပုံမှန်အတိုင်း ရိုက်တင်၊ Upload လုပ် လုပ်ပါ.
ဒါဆိုရင်ကိုပဲ Scroll Box လေး တင်နည်း ပြီးပါပြီ.
ဟင်. ဒါပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး.
အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်. ဒါမှ ကိုယ်လိုသလို အကျဉ်းအကျယ် ပြုပြင်ယူနိုင်မှာပေါ့ဗျာ.
<div style="border: 3px solid green; overflow: auto; height: 100px; width: 150px; color: black; background-color: white;">YOUR TEXT HERE</div>
Border: 3px solid green
အဲဒါလေးက ဘာပြောလဲ ဆိုတော့ Box အစိမ်းရောင်လေး တစ်ခုလုပ်မယ်. ဘောင်ကို3pixel အထူပေးမယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်. အရောင်တွေ အမျိုးမျိုး ပြောင်းယူနိုင်သလို border ကိုလည်း Dashed တို့ Dotted တို့ စသဖြင့် ပေးနိုင်ပါတယ်.
height:100px , width:150px
ဒါလေးကတော့ Box လေးရဲ့ အမြင့်နဲ့ အကျယ်ကို ပြောပါတယ်. နံပါတ်လေးတွေကို လိုသလို ကစားကြည့်ပြီး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Box အရွယ်အစားလေးကို ဖန်တီးယူနိုင်ပါတယ်. color:black ဒါကတော့ Box လေးထဲမှာ ပေါ်မယ့် စာသားလေးတွေရဲ့ အရောင်ပါ. Red, Orange, Green စသဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်.
ဒါကတော့ Box လေးရဲ့ နောက်ခံ အရောင်ပါ. ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ နောက်ခံ အရောင်နဲ့ Text အရောင်ကို လိုက်ဖက်အောင် ရွေးချယ်ပေးသင့်ပါတယ်. ဥပမာ. အဖြူနောက်ခံမှာ အမည်းစာလုံးပေါ်အောင် လုပ်သလိုမျိုးပေါ့ဗျာ.
အစမ်းလုပ်ပြထားတဲ့ Box လေးကို လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်. မရှင်းလင်းတာရှိရင်လည်း ကော်မန့်မှာ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်.
အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ဘလော့ဂင်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ…
ဘ၀ဆိုတာ… ဒါပဲ ခင်…
လမ်းလျှောက်တတ်သောသစ်ပင်နှင့် အတောင်ပံမရှိသော တေးသီငှက် (၃)
သစ်ပင်နဲ့ ငှက်ကလေးတို့ကြားမှာ သံယောဇဉ်ကြိုး အထပ်ထပ် ချည်နှောင်မိခဲ့ကြတယ်.
ငှက်ကလေး အထီးကျန်နေခဲ့ရင် သစ်ပင်က ကဗျာလေးတွေစပ်လို့၊ ရယ်စရာမောစရာလေးတွေ ပြောလို့ ပျော်ရွှင်မြူးတူးစေခဲ့သလို သစ်ပင်ဝမ်းနည်းစိတ်ပျက်နေခဲ့ရင်လည်း ငှက်ကလေးက အားပေးစကားလေးတွေ ပြောလို့ ပြန်လည် တည့်မတ်စေခဲ့တယ်လေ.
တစ်ည ငှက်ကလေး သစ်ပင်နဲ့ စကားတွေ ကောင်းနေခဲ့ရင်းက သစ်ပင်က ငှက်ကလေးကို အရမ်းယုံကြည်သွားခဲ့တယ်လို့ သူ့ပါးစပ်က ထုတ်ပြောခဲ့တယ်.
“မင်းငါ့ကို ယုံကြည်တယ်လှို့ ပြောတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ငါလည်း မင်းကို အားကိုးတယ်. လေးစားတယ်. ခင်မင်မိတယ်ကွာ.”
သစ်ပင်လည်း သူ့သစ်ကိုင်းလေးတစ်ဖက်ကို အသာလေး မြှောက်လိုက်ရင်းက.
“ဟိုးမှာ မြင်နေရတဲ့ ကောင်းကင်ပြင်ကြီးကို တိုင်တည်ပြီး ငါပြောချင်ပါတယ်. ငါမင်းကို သိပ်ချစ်တယ် ငှက်ကလေးရယ်…”
ငှက်ကလေးလည်း ပြုံးနေရာက မျက်နှာတစ်ချက် ပျက်သွားခဲ့တယ်.
“မဟုတ်ဘူး သစ်ပင်… မဟုတ်ဘူး..”
“ဘာလဲ. ငါမင်းကို ချစ်လို့မရဘူးလား. ငါက သစ်ပင်ဖြစ်နေပြီးတော့ မင်းက ငှက်ကလေး တစ်ကောင် ဖြစ်နေလို့လား”
“မဟုတ်ဘူး သစ်ပင်. မင်းငါ့ကို ခင်လို့ရတယ်. ချစ်လို့မရဘူး”
“ငါနားမလည်ဘူး. ငှက်ကလေးရယ်. ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ငါနားလည်အောင် ပြောပြပေးပါ.”
“မဟုတ်ဘူး. ငါသိချင်တယ်. ငါခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်.”
ငှက်ကလေးလည်း တော်တော်လေး အကြံအိုက်သွားခဲ့တယ်. သစ်ပင်ကို ပြောလည်း ပြောပြချင်တယ်. သစ်ပင်ခံစားသွားရမှာကိုလည်း သူမလိုလားဘူးလေ.
ဒါပေမယ့် မပြောပြပြန်ရင်လည်း အခြေအနေတွေ ပိုဆိုးလာနိုင်တာကြောင့် ငှက်ကလေး ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်.
“အင်း. ပြောပါ. ငါနားထောင်နေပါတယ်.”
သစ်ပင်လည်း သူ့ရဲ့ သစ်ကိုင်းတစ်ဖက်ကို လိုလိုမယ်မယ် မြေကြီးပေါ်မှာ ထောက်ထားရင်းက သူ့ကိုယ်သူ တည့်မတ်အောင် ထိန်းထားခဲ့တယ်.
“ငါဟာ အချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်အိပ်ရမယ့် ငှက်တစ်ကောင်ပါ.”
“ဟတ်. ဒါများဘာဆန်းလို့လဲ. အချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုတာ ငှက်တိုင်းပဲကို…”
“မဟုတ်ဘူး သစ်ပင်… သေချာနားထောင်ပါ.”
“အိုကေကွာ. ငါနားထောင်မယ်. ငါစိတ်လောနေလို့ပါ..”
“ငါပြန်ပြောပြမယ် သစ်ပင်. ငါဟာ အချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်အိပ်ရမယ် ဆိုတာ တစ်ခြားငှက်တွေလို သူတို့ နှစ်သက်ရာ သစ်တစ်ပင်ပေါ်မှာ အိပ်စက်အနားယူဖို့ ခွင့်မရှိဘူး.”
ငှက်ကလေးက အဲလိုပြောရင်း သစ်ပင်ကို လှမ်းကြည့်နေသတဲ့…
သစ်ပင်လည်း သူ့သစ်ကိုင်းကို တစ်ချက် လှုပ်ပြရင်းက ဆက်ပြောဖို့ အချက်ပေးလိုက်တော့.
“ငါ အချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်အိပ်ဖို့ ငါ့မှာ သတ်မှတ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ အိမ်တစ်လုံး ရှိနှင့်ပြီ သစ်ပင်ရယ်…”
ထူးခြားလွန်းစွာ နှုတ်ဆိတ်နေတဲ့ သစ်ပင်ကို လှမ်းကြည့်ရင်းက.
“မင်းတစ်ခုခု ပြန်မပြောတော့ဘူးလား သစ်ပင်…”
သစ်ပင်လည်း အိပ်မွေ့ချခံထားရာက နိုးလာသူတစ်ယောက်လို အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွားခဲ့ရင်းက…
“ဟင်… ငါ ဘာပြန်ပြောရမှာလဲ…”
“တစ်ခုခုပေါ့ သစ်ပင်ရယ်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ. မင်းရင်ထဲက ထွက်ကျလာမယ့် တစ်ခုခုပေါ့.”
သစ်ပင်လည်း သူ့သစ်ကိုင်းတွေအောက်က မြေကြီးကို အကြောင်းမဲ့ စိုက်ကြည့်နေခဲ့ရင်းက သူ့သစ်ကိုင်းလေးတွေကို လှုပ်လိုက်ခဲ့ပြန်တယ်.
ပြီးတော့ ငှက်ကလေးရဲ့ ချစ်စရာ မျက်နှာလေးကို နွမ်းနယ်အားလျော့တဲ့ အကြည့်လေးတွေနဲ့ ကြည့်ရင်းက ကဗျာသံစဉ်ချိုလေးတစ်ပုဒ် ထွက်ကျသွားခဲ့ပြန်တယ်လေ…
ချစ်သူနဲ့ ကိုယ်ကြားမှာ မကျော်နိုင်တဲ့ အဆီးအတားတစ်ခုရှိနေတယ်
ချစ်သူမလိုလားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးကိုလည်း ကိုယ်မဖန်တီးချင်ပါဘူးကွယ်…
ချစ်သူမသိစေချင်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ကိုယ်သိအောင် ကြိုးစားမိခဲ့တယ်.
ဒါဟာလည်း ချစ်သူရင်ထဲက ပြောမပြဖြစ်တဲ့ နာကျင်မှုတွေကို ကုစားပေးချင်လို့ပါ.
ကိုယ်ဒီလိုကြိုးစားမိလို့ ချစ်သူ့ရင်ကို ပိုနာကျင်မိသွားစေလားဟင်
ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ရင်ဘတ်ကို ကျောပြင်အဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ချစ်သူရယ်..
ကိုယ့်ရင်ထဲက အချစ်တွေကို ချစ်သူ မသိချင်နေပါ.
ကိုယ့်ဆင်ခြင်တုံတရားရဲ့ ကျဆုံးမှုကိုလည်း ချစ်သူ မမြင်ချင်နေပါ.
ချစ်သူရဲ့မျက်ဝန်းလေးပေါ်မှာ ဖြာဆင်းနေတဲ့ နေခြည်နုထွေးလေးတွေမှာ
ချစ်သူအပေါ်ထားတဲ့ ကိုယ့်မေတ္တာရဲ့ နွေးထွေးမှုလေးတွေ ပျော်ဝင်နေတယ်.
ချစ်သူရဲ့ နှလုံးသားထဲက ကိုယ်ချင်းစာတရားလေးကို ဖော်ကျူးပေးနိုင်ဖို့ပေါ့
ချစ်သူရဲ့ ရယ်သံချိုချိုလွင်လွင်လေးနဲ့ ကုစားပေးဖို့ပေါ့
ချစ်သူ့ရဲ့အာရုံထဲမှာ သက်ရောက်မှုတွေ ကင်းကွာနေတဲ့
ချစ်သူရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို နူးနူးညံ့ညံ့လေးနမ်းပြီး
လမ်းလျှောက်တတ်သောသစ်ပင်နှင့် အတောင်ပံမရှိသော တေးသီငှက် (၂)
အဲဒီ့နောက်ပိုင်း ငှက်ကလေးဟာ သစ်ပင်ကြီးဆီကို မကြာခဏ ပျံသန်းရောက်ရှိခဲ့သလို သစ်ပင်ဟာလည်း ငှက်ကလေးလာမယ့်နေ့ကိုပဲ မျှော်နေမိခဲ့တယ်လေ.
ငှက်ကလေး သစ်ပင်ဆီကို ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာ သစ်ပင်ဟာ ခါတိုင်းလို စိမ်းလန်းရွှင်ပျနေခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး.
“မင်း ဘာဖြစ်နေတာလဲ သစ်ပင်. ငါ့ကို ခါတိုင်းလိုတောင် မဆီးကြိုတော့ပါလား.”
သစ်ပင်က အားယူပြီး ခေါင်းမော့ကြည့်ရင်းက.
“မဟုတ်ပါဘူး ငှက်ကလေးရယ်. ငါ ၀မ်းနည်းနေလို့ပါ”
အဲလိုပြောရင်း ခေါင်းပြန်ငုံ့သွားတဲ့ သစ်ပင်ကို ကြည့်ရင်း ငှက်ကလေးစိတ်ထဲ မရိုးမရွ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်.
“ငါ့ကို ပြောပြလေ. မင်း ဘာတွေ ဖြစ်နေတာလဲ ဆိုတာကိုပေါ့”
သစ်ပင်က မချိပြုံး ပြုံးပြရင်းက.
“ငါ ညက မင်းကို သိပ်လွမ်းနေခဲ့တယ် ငှက်ကလေး...”
ငှက်ကလေးက သူ့အတောင်ပံလေးကို တဖျပ်ဖျပ် ခတ်လိုက်ရင်းက.
“သစ်ပင်ကလည်းကွာ. ဒါ စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာလား. မင်းငါ့ကို သတိရလို့ လွမ်းတာပဲ. ပြီးတော့ ငါ အခုမင်းဆီကို လာနေတာပဲလေ.”
“ငါက မင်းကို အမြဲ လာနေစေ့ချင်တာ. ပြောရရင် မင်းစိတ်ထဲမှာ ငါဆိုတာ ရှိနေတဲ့ အချိန်တိုင်း ငါ့ဘေးနားမှာ မင်းကို ရှိနေစေချင်တာ”
“ငါကြိုးစားပြီး လာနေတာပဲလေ. တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ငါမလာနိုင်တာ တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့ကွာ. ငါ့မှာလည်း ငှက်တစ်ကောင်ရဲ့ ၀တ္တရားတွေ ရှိသေးတယ်ကွ.”
“မဟုတ်ဘူး ငှက်ကလေး. မင်းငါ့ဆီကို လာတာမလာတာထက် မင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်တဲ့ အတောင်ပံတွေအတွက်သာ ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတာပါ.”
ပြီးတော့ မျက်နှာလေးကို လွှဲလိုက်ရင်းက..
“ဒီလိုပါပဲ. သစ်ပင်ရယ်. ငါက ကိုယ်ပိုင်အတောင်ပံ မရှိတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်ပါ.”
ငှက်ကလေးက သက်ပြင်းတစ်ချက်ကို လေးတွဲ့စွာ ချလိုက်ရင်းက
“အတိအကျ ပြောရရင်တော့ ငါက အတောင်ပံ မရှိတဲ့ တေးသီငှက်တစ်ကောင်ပါ သစ်ပင်ရယ်…”
ဒီလိုနဲ့ သူတို့ကြားထဲမှာ ရေခဲမြစ်တစ်ခု ဖြတ်စီးနေခဲ့တယ်.
ခဏနေတော့ သစ်ပင်လည်း တစ်စုံတစ်ခုကို ချက်ချင်း သတိရသွားရင်းက…
“ဆောရီးကွာ. ငါလည်း ခံစားနေလိုက်တာ နည်းနည်း သတိမေ့သွားတယ်. ရော့ မင်းအတွက်…”
ငှက်ကလေးလည်း သစ်ပင်ဖက်ကို ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ နှစ်ခြိုက်စွာ ပြုံးမိသွားတယ်.
သစ်ပင်ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာတော့ သူမ သိပ်ကြိုက်တဲ့ အသည်းပုံ သစ်သီးလေးတစ်လုံး….
ရွှန်းလဲ့စွာ ပြုံးပြနေချင်သေးတယ် ချစ်သူ….
တစ်နေ့ ငှက်ကလေး သစ်ပင်ဆီကို အလာမှာ သစ်ပင်ပေါ်မှာ တစ်ခြားငှက်ကလေးတွေ ပျော်ရွှင်မြူးတူးနေကြတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်.
အဲဒါနဲ့ငှက်ကလေးလည်း သစ်ပင်ဆီကို မလာတော့ဘဲ ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေသာ ရပ်ကြည့်ပြီး အကဲခတ်နေခဲ့တာပေါ့.
သစ်ပင်လည်း သူ့ကို စိုက်ကြည့်နေတဲ့ ငှက်ကလေးကို သတိမထားမိခဲ့ဘူး.
တစ်ခြားငှက်ကလေးတွေ လိုအပ်တဲ့ အရိပ်အာဝါသနဲ့ သစ်သီးလေးတွေကို သီးပေးနေခဲ့တာနဲ့ တော်တော် အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တယ်.
တစ်စုံတစ်ယောက်က စိုက်ကြည့်နေသလို ခံစားလိုက်ရတာနဲ့ သစ်ပင်လည်း သူ့နောက်ကို ဖျတ်ခနဲ လှည့်ကြည့်မိလိုက်တော့…
“ငှက်ကလေးရယ်… မင်းဘယ်တုန်းက ရောက်နေခဲ့တာလဲ. ဘာလို့ မနှုတ်ဆက်တာလဲဟင်”
“ငါ မင်းကို တွေ့ပါတယ်. တစ်ခြားငှက်တွေနဲ့ ပျော်နေလိုက်တာ. ဟွန်း. ငါရောက်နေတာတောင် မသိဘူးမလား.”
“မဟုတ်ဘူး ငှက်ကလေးရယ်. သူတို့လိုတာလေးတွေကို ငါပေးနေခဲ့တာကလွဲလို့ တစ်ခြား အပိုခံစားချက်တွေ မပါပါဘူးကွာ.”
“မယုံပါဘူး. ကြည့်နေတာ ကြာလှပြီ. သွားကြီးကို ဖြီးလို့. (အဲ.) သစ်ကိုင်းကြီးကို အကြီးကြီးလုပ်ပြထားပြီး ငှက်တွေ အများကြီးနားလို့ရအောင် လုပ်ထားလို့. မသိရင်ခက်မယ်. သစ်ပင်. ဒါကြောင့်လည်း သစ်ပင်ခြေရင်းမှာ သစ်စေ့တွေ တောင်လိုပုံနေတာပေါ့.”
“အာ. ခက်ချေပြီ. ငါ အဲလိုမဟုတ်ဘူး ငှက်ကလေး… သူတို့လေးတွေ အဆင်ပြေသွားစေချင်တာ၊ ခရီးတစ်ထောက်မှာ အမောပြေသွားစေချင်တာကလွဲလို့ ငါ့မှာ အပိုရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူး. ယုံပါကွာ.”
ငှက်ကလေးက သူ့နှုတ်ခမ်းထော်ထော်လေးကို နှစ်တောင်လောက် စူထားရင်းက.
သစ်ပင်လည်း ငှက်ကလေး စိတ်ပြေအောင် ဘယ်လိုချော့ရမှန်းမသိ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်.
နောက်တော့ အကြံတစ်ခု ရသွားခဲ့တာနဲ့…
“မင်းငါ့ကို စိတ်မဆိုးနဲ့တော့ကွာ. ငါမင်းကိုလွမ်းလွန်းလို့ ညက ကဗျာတစ်ပုဒ်တောင် စပ်ထားသေးတယ်. နားထောင်မလား. ငါဖတ်ပြမယ်လေ”
“သွားပါ. ခုမှ လာချော့မနေနဲ့. မင်းက သစ်ပင်ပဲကို. တေးဆိုတတ်တဲ့ ငှက်တစ်ကောင်မှ မဟုတ်တာ. မင်းကဗျာစပ်တတ်မယ်လို့ ငါမထင်ဘူး”
သစ်ပင်က စပ်ဖြဲဖြဲ ရယ်ရင်းက
လှပတဲ့ မျက်စောင်းလေးတစ်ခု ထိုးလိုက်ရင်း ငှက်ကလေးက.
သစ်ပင်က ချောင်းတစ်ချက် ဟန့်လိုက်ရင်းက ဟန်တွေပန်တွေ များနေခဲ့တာပေါ့. ကဗျာဆိုပြရတော့မယ်လေ….
“သိပ်ပဲများတယ်နော်. ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ဆိုပြဖို့အရေး ဆံပင်သပ်တင်ရတာနဲ့ သစ်ကိုင်းတွေ နေရာကျအောင် ပြင်ဆင်နေရတာနဲ့ ဟွန်း. အမြင်ကို ကပ်တယ်…”
“ဟတ်ဟတ်ဟတ်…. ဒါက စတိုင်လ်ပါ… စတိုင်လ်ရှိမှ စတားဖြစ်မယ်လေ. စိတ်လျှော့. ကိုယ် တကယ် ဆိုပြမှာပါ.”
အဲလိုပြောလိုက်တော့ ငှက်ကလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းနှစ်တောင်လည်း တစ်တောင်လောက်ပဲ ဖြစ်သွားခဲ့တော့တယ်.
ကျန်တစ်တောင်ကတော့ ကဗျာလေးကို ကြားရတဲ့အထိ ငှက်ကလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းထော်ထော်လေး အပေါ်မှာ နေရာယူထားဦးမှာပဲတဲ့လေ…
သစ်ပင်ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေအောက်မှာ အလွမ်းတွေ ချက်ချင်း နေရာယူသွားခဲ့တယ်.
အဲဒီ့နောက်မှာတော့ ခံစားချက်အပြည့်ပါတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် သစ်ကိုင်းတွေကြားထဲက လိမ့်ကျလာခဲ့တယ်လေ…
ဒီတစ်ညမှာ ငါရင်ဖွင့်ပြီး ငိုပါရစေနော်
ငါတို့ကို ပြုံးပြီး ကြည့်နေကြတယ်…
မင်းရဲ့မျက်နှာလှလှလေးပေါ်မှာ ငါ့ရဲ့ အနမ်းလေးတွေ ခြွေချုလိုက်တိုင်း
“အဲဒါ မင်းကို သိပ်လွမ်းလွန်းလို့ ညက ငါထိုင်စပ်မိတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပဲ.”
အဲလိုပြောရင်း သစ်ပင်လည်း ငှက်ကလေးရဲ့ မျက်နှာလေးကို မြတ်နိုးခြင်းများစွာဖြင့် စိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်.
ငှက်ကလေးလည်း ကဗျာထဲမှာ မျောနေခဲ့တယ်နဲ့တူပါတယ်. သစ်ပင်က ငှက်ကလေးရဲ့ ခေါင်းလေးကို သူ့သစ်ကိုင်းလေးနဲ့ ပုတ်လိုက်တော့မှ သတိပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်.
“Wow! အဲဒါ မင်းစပ်တာလားဟင်”
“မင်း ငါ့ကိုလွမ်းလို့စပ်တယ်ဆိုတာ တကယ်လားဟင်”
“အရင်တုန်းကရော ဒီလိုမျိုး ကဗျာတွေ စပ်ပြီး တစ်ခြားငှက်ကလေးတွေကို ဆွဲဆောင်ခဲ့ဖူးလား”
“တစ်ခွန်းပဲ ပြောမယ်. နိုး!”
ငှက်ကလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းထော်ထော်လေးလည်း ခုတော့ နေရာမှန်ကို ပြန်ရောက်သွားခဲ့တယ်.
သစ်ပင်က ဘာမှမပြောဘဲ ပြုံးနေခဲ့တယ်.
“အထူးသဖြင့် ဟိုအပိုဒ်လေးလေ. ဘာတဲ့
“လှလိုက်တာ. မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းထိ ပန်းတွေ ပွင့်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာလေးက သိပ်လှတာပဲ.”
“အဲဒါ ဘာဆိုလိုတာလဲ သိလား ငှက်ကလေး”
“အဲဒါ မနေ့ညက မင်းကို တစ်ညလုံး ငါနမ်းနေခဲ့တယ်လို့ ပြောတာပဲ”
ဖဒိုမန်းရှာနှင့် ဒီဗွီဘီ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
ဇွန်လ (၂၃) ရက်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ဒီဗွီဘီ သတင်းဌာနဟာ ကေအန်ယူ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖဒိုမန်းရှာနဲ့ အခုလို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ဖူးပါတယ်. အဲဒါကို ပြန်လည်ရှာဖွေပြီး တင်ပြလိုက်ပါတယ်...
ပြည်ထောင်စုအရေးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအပေါ် ဖဒိုမန်းရှာ၏ အမြင်...
ခေတ်ပြိုင် မှ ကူးယူဖော်ပြသည်...
လမ်းလျှောက်တတ်သောသစ်ပင်နှင့် အတောင်ပံမရှိသော တေးသီငှက်
လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းနေတဲ့ ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ဟာ တစ်နေ့မှာ သစ်ပင်ကြီး တစ်ပင်ပေါ်ကို ရောက်ရှိနားခိုခဲ့ပါတယ်.
သစ်ကိုင်းလေးပေါ်ကို ညင်ညင်သာသာလေး ခိုနားလိုက်တဲ့ ငှက်ငယ်လေးကို သစ်ပင်ကြီးက ရင်ဖွင့်လို့ ကြိုဆိုခဲ့တာပေါ့.
“သစ်ပင်ကြီးရေ… ငါက ဘယ်နှစ်ကောင်မြောက် နားခိုခြင်းလဲ” တဲ့..
“ဘယ်နှစ်ကောင်မြောက် နားခိုခြင်းလဲ ဆိုတာ ငါမပြောပြချင်ဘူး. မင်းသိနိုင်ပါတယ်. ငါ့သစ်ပင်ရဲ့ ခြေရင်းကို ကြည့်လိုက်. ငါ့ရင်ခွင်မှာ ခိုနားသွားတဲ့ ငှက်ငယ်တစ်ကောင်စီဟာ ငါ့ရင်ဘတ်ထဲက သစ်သီးတစ်လုံးစီကို ကိုက်ဆွဲစားသောက်ပြီး အစေ့လေးတွေပဲ ချန်ထားခဲ့တယ်.”
ငှက်ကလေးလည်း သစ်ပင်ကြီး ပြောပြတဲ့ နေရာကို ကြည့်လိုက်တော့တာပေါ့.
“အိုး… သစ်စေ့တွေ တောင်လိုပုံနေပါရော့လား… အဲလောက်တောင်ပဲ များလားဟင်…”
“ဒီလောက်တောင် ငှက်ကလေးတွေ ၀င်နားနေပါလျက်နဲ့ သစ်ပင်ကြီးက ဘာလို့ဝမ်းနည်းနေရတာလဲ. တစ်ကိုယ်တည်း ထီးထီးကြီး ဖြစ်နေရတာလဲ”
သစ်ပင်ကြီးက အဝေးတစ်နေရာကို ဆွေးဆွေးမြည့်မြည့် ကြည့်ရင်း ပြောတယ်.
“ငါ့မှာ အမြစ်တွေ ရှိနေခဲ့ပြီး သူတို့မှာ တောင်ပံတွေ ရှိနေခဲ့တယ်လေ…”
ငှက်ကလေးလည်း သူ့တောင်ပံကို သစ်ပင်ကြီး မမြင်အောင် မသိမသာလေး အောက်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်သတဲ့.
“သစ်ပင်ကြီးရယ်… သင့်ရဲ့ အရိပ်အာဝါသသာ တကယ်ကို ကောင်းမွန်မယ်ဆိုရင် တောင်ပံပါတဲ့ ငှက်ကလေးတွေလည်း အချိန်တန်တော့ သင့်ရင်ခွင်ကို ပြန်လာလိမ့်မပေါ့. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ ပြည့်စုံကောင်းမွန်အောင် အရင်လုပ်ပါ သစ်ပင်ကြီးရယ်.”
ဒီစကားကို ကြားလိုက်ရတော့ သစ်ပင်ကြီးက သူ့ရဲ့ အမြစ်တွေထဲက တစ်ချောင်းကို လှုပ်ပြသတဲ့..
“မင်းသိလား. ငှက်ကလေး. ငါက တကယ်တော့ လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့ သစ်တစ်ပင်ပါ. ငါ့အပေါ်ကို စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတရား ထားရှိမယ့် ငှက်ကလေးတစ်ကောင်လောက် လိုချင်လို့ လမ်းမလျှောက်တတ်ဟန် ဆောင်နေတာပါ.”
“သစ်ပင်ကြီးက ဘာလို့ သစ်ပင်နောက်တစ်ပင်ကို မလိုချင်ဘဲ ကိုယ်နဲ့ သဘာဝမတူတဲ့ ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုမှ လိုချင်နေရတာလဲ. သိပ်တော့ သဘာဝမကျဘူး ထင်တယ်နော်.”
“အဲလိုတော့ မပြောနဲ့လေ. သစ်ပင်နဲ့ငှက်ငယ်ကြားမှာ ဆက်စပ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်. သစ်ပင်မှာ တည်ငြိမ်ခြင်း၊ ခိုကိုးရာကိုပေးခြင်း၊ နွေးထွေးလုံခြုံစေခြင်း စတဲ့ မေတ္တာတရားတွေ ရှိနေသလို ငှက်ငယ်မှာလည်း စွန့်စားခြင်း၊ စူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ သတ္တိဗျတ္တိနဲ့ ပြည့်စုံခြင်း စတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (အဲ) ငှက်ရည်ငှက်သွေးတွေ ရှိနေတယ်ကွ.”
ငှက်ကလေးရဲ့ မျက်နှာဖူးရွရွလေးကို သစ်ပင်ကြီးက ချစ်မြတ်နိုးစွာ စိုက်ကြည့်ရင်း ဆက်ပြောတယ်.
“ဒီလိုပါပဲလေ. ဘ၀နှစ်ခု ပေါင်းစပ်ခြင်းမှာလည်း ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ ထပ်တူထပ်မျှ တူညီနေဖို့ မလိုပါဘူး. ဒီ့ထက် ပိုအရေးကြီးတာက တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ခွင့်လွှတ်နားလည်တတ်မှုပဲပေါ့. သစ်ပင်လမ်းမလျှောက်နိုင်တာကို ငှက်ကလေးက နားလည်လို့ အချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်လာပြီး သစ်ပင်ကြီးရဲ့ ရင်ခွင်မှာ မှေးဝင်အိပ်စက်တာ၊ ငှက်ငယ်လေး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာသမျှကို သစ်ပင်ကြီးက သူ့ရင်ခွင်မှာ ပြေပျောက်အပန်းဖြေနိုင်စေတာ. ဒါဟာ ဘ၀နှစ်ခု လှပစွာ ပေါင်းစပ်ခြင်းပဲပေါ့.”
ငှက်ကလေးက ခပ်တွေးတွေးလေး ဆက်ပြောသတဲ့…
“အင်း…. ဒါဆိုရင်… ငှက်ကလေး မပြန်လာနိုင်တော့တဲ့ အခါကျရင်… ဒါမှမဟုတ်. သစ်ပင်ကြီး ညှိုးလျော် နွမ်းခြောက်သွားရင် ဘာဖြစ်လာနိုင်သလဲ ဟင်..”
သစ်ပင်ကြီးက ပင့်သက် တစ်ချက်ရှိုက်လို့ ပြန်ပြောသတဲ့.
“ဒါဟာ တစ်နေ့မှာ ဖြစ်လာနိုင် ကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့ လောကနိယာမတရားတွေမို့ ဘာမှဆန့်ကျင်ပြီး ပြောနေစရာ မလိုပါဘူး. အရေးအကြီးဆုံးက ငါကတော့ အစွမ်းကုန် စိမ်းလန်းရှင်သန်နေအောင် ကြိုးစားသွားမယ်. သစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့ ငှက်ငယ်အပေါ်မှာ ထားရှိသင့်တဲ့ တာဝန်တွေ ကျေပြွန်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမယ်. သူမနေနိုင်တော့လို့ အဝေးကို ပျံသန်းထွက်ခွာရင်း တစ်ခြားသစ်ပင်တစ်ပင်မှာ ခိုနားခဲ့ရင်လည်း နားပါစေလေ. ငါ့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို သက်ဝင်ယုံကြည်နေသမျှ၊ ငါ့ရဲ့ သံယောဇဉ်တွေကို စာနာပေးနေနိုင်သမျှ သူနဲ့ငါ့ကြားမှာ လှပတဲ့ ပေါင်းစပ်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေမှာပါ.”
“လောလောဆယ်တော့ သစ်ပင်ကြီးနဲ့ နေရတာ သိပ်ပျော်တာပဲ. အခုခဏအပြင်ကိုသွားဦးမယ်. ဒါပေမယ့် ပြန်လာခဲ့မယ်နော်.”
သစ်ပင်ကြီးက သူ့ခေါင်းကို တစ်ချက်ငြိမ့်လိုက်ရင်း ခွင့်ပြုလိုက်သတဲ့…
တစ်ညလုံး ငှက်ကလေး ပြန်မလာခဲ့ပါဘူး.
တစ်နေ့လုံးလည်း သူမ ပျောက်နေခဲ့တယ်.
ဒီကြားထဲမှာ ငှက်ငယ်လေးတစ်ချို့ သစ်ပင်ကြီးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲကို အစမ်းသဘောမျိုး ၀င်ရောက်နားခိုကြည့်ကြတယ်.
သစ်ပင်ကြီးက ခပ်တန်းတန်းပဲ နေခဲ့တယ်လေ. သူတို့တွေ လိုချင်တဲ့ အသီးတွေ၊ အရိပ်အာဝါသတွေကို ပေးခဲ့တာက လွဲလို့ တစ်ခြားသော ခံစားမှုတွေ မရှိခဲ့ဘူးတဲ့. သစ်ပင်ကြီးရဲ့ ဟိုးနက်ရှိုင်းတဲ့ နှလုံးသားထဲမှာတော့ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးသော အရာတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သစ်သီးချိုချိုလေးတစ်လုံး ရှိနေခဲ့တယ်လေ.
သစ်ပင်ကြီးကတော့ သူနဲ့ တစ်ခါ စကားလက်ဆုံ ကျသွားခဲ့ဖူးတဲ့၊ သူ့နှလုံးသားကို မသိမသာလေး ခိုးယူသွားဖူးတဲ့ ငှက်ငယ်လေးကိုပဲ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်နေခဲ့တာပေါ့. သူသိမ်းထားတဲ့ သစ်သီးလေးကို အချိန်မီပေးခဲ့ချင်လို့၊ စားသုံးစေချင်လို့ပေါ့.
နွေ၊မိုး၊ဆောင်း သုံးရာသီလုံး ပြောင်းသွားခဲ့လို့ အချိန်တွေလည်း လင့်ခဲ့ပြီ. သစ်ပင်ကြီးလည်း နွမ်းလျညှိုးလျော် လာခဲ့ပြီပေါ့.
တုန်ရီနေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ သစ်ပင်ကြီးကတော့ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းဖက်ဆီကို မျှော်ကြည့်နေဆဲပဲ…
တစ်နေ့ ငှက်ငယ်လေး ပြန်လာခဲ့တယ်.
သစ်ပင်ကြီးရယ်လေ… ၀မ်းသာလွန်းလို့ သူ့ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးကို အစွမ်းကုန်ဖွင့်ထားပေးခဲ့တာပေါ့.
ငှက်ကလေး သူ့နားရောက်လာလေလေ သစ်ပင်ကြီးမှာ ရင်ခုန်လှိုက်မောလေလေနဲ့ ဖြစ်နေခဲ့တယ်.
အနားရောက်လာတော့မှ ငှက်ကလေးရဲ့ မျက်နှာလေးကို သစ်ပင်ကြီး သေသေချာချာ မြင်တွေ့လိုက်ရတော့တယ်.
“အိုး… မင်းတော်တော် အိုစာသွားခဲ့တာပဲ. ဘာတွေ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေခဲ့လဲ”
ငှက်ကလေးက သစ်ပင်ကြီးရဲ့ နှလုံးသားထဲက သစ်သီးလေးတစ်လုံးကို ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ အရင်လှမ်းဆွဲလိုက်သတဲ့.
သစ်ပင်ကြီးရင်ထဲမှာ ဆတ်ခနဲ နာသွားပေမယ့် မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး သူမအတွက် နောက်ထပ်သစ်သီးတစ်လုံး ဖူးပွင့်နိုင်ဖို့ အရံသင့် ကြိုးစားထားသတဲ့.
“ငါ. ငှက်ဖိုတစ်ကောင်နဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်.”
ဆစ်ခနဲ ရင်ထဲမှာ ကျင်သွားတာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး သစ်ပင်ကြီးက ဆက်မေးတယ်.
“ချစ်ကာစက ကောင်းပါတယ်. ငါတို့တွေ သိပ်ကို ပျော်ခဲ့ကြတယ်. ငါတို့ယုံကြည်စွာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတယ်ကွာ.”
သစ်ပင်ကြီးလည်း သူ့ရဲ့ သစ်ကိုင်းတစ်ဖက်ကို မြေပေါ်ကို ထောက်လို့ သူ့ကိုယ်သူ ဟန်မပျက်အောင် ထိန်းထားရင်းက ဆက်မေးတာပေါ့.
ငှက်ကလေးလည်း သူ့နှုတ်ခမ်းထော်ထော်လေးထဲက သစ်စေ့လေးကို ထွေးထုတ်လိုက်ရင်းက သစ်ပင်ကြီးကိုမေးတယ်.
“ငါ့ကို နောက်ထပ်သစ်သီးတစ်လုံးလောက် သီးပေးပါလားဟင်”
သစ်ပင်ကြီးလည်း ၀မ်းသာအားရနဲ့ပဲ သူ့ရင်ဘတ်ထဲက နှလုံးသားကို သစ်သီးအယောင်ဆောင်လို့ ပေးသတဲ့. တကယ်တော့ ငှက်ကလေးအတွက် သီးတဲ့ သစ်သီးတွေဟာ သူ့နှလုံးသားကို ပုံဖျက်ထားတဲ့ သစ်သီးလေးတွေ ဖြစ်နေခဲ့မှန်း ငှက်ကလေး ဘယ်တုန်းကမှ မရိပ်မိခဲ့ပါဘူးလေ… ငှက်ကလေး တစ်ကိုက်ကိုက်လိုက်တိုင်း သစ်ပင်ကြီးရဲ့ ခွန်အားတွေ တစ်စစီ ယုတ်လျော့အိုမင်းသွားနေခဲ့တယ်.
“မင်း သိပ်ပင်ပန်းနေပုံပဲ. နောက်နေ့မှ ဆက်ပြောပါလားဟင်. ဒီည ဒီမှာပဲ အိပ်လိုက်နော်.”
ငှက်ကလေးလည်း သစ်ပင်ကြီးရဲ့ စကားကိုကြားတော့ သစ်သီးလေးကို မွတ်သိပ်စွာ စားသောက်နေရာက ခေါင်းမော့ကြည့်တယ်.
“အင်း. ကောင်းသားပဲ. ငါလည်း ဘယ်ကိုမှ မသွားချင်ဘူး. သစ်ပင်ကြီးနဲ့နေရတာ ပျော်တယ်. စိတ်ချမ်းသာတယ်.”
သစ်ပင်ကြီးက ငှက်ကလေးရဲ့ အတောင်ပံလေးကို သူ့သစ်ရွက်နုနုလေးတွေနဲ့ အသာလေးထိုးဖွရင်း တိုးတိုးလေး မေးတယ်.
“မင်း ငါ့ကို ချစ်လားဟင်”
ငှက်ကလေးက အထိတ်တလန့် ထခုန်လိုက်တယ်.
“နိုးနိုးနိုး…. မဟုတ်ဘူး… ငါမင်းကို မချစ်ဘူး.”
အဲဒီ့အခါကျတော့လည်း ငှက်ကလေးက စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြန်ရော…
“မဟုတ်ဘူး သစ်ပင်ကြီးရယ်… ငါ့ကို နားလည်ပါ. ငါမင်းကို ချစ်လို့ မရတာကို နားလည်ပေးပါ. မချစ်လို့မဟုတ်ဘူး. ချစ်လို့မရတာပါ သစ်ပင်ကြီးရယ်…”
သစ်ပင်ကြီးလည်း မျက်စိရှုပ် နားရှုပ် (အဲ) သစ်ပင်ဆိုတော့ သစ်ကိုင်းရှုပ်၊ သစ်ရွက်ရှုပ် ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့.
ငှက်ကလေးက ထုံးစံအတိုင်း သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကို ခပ်ထော်ထော်လေး လုပ်ရင်းက..
“လူကိုများ… (အဲ) ငှက်ကိုများ အချစ်တဲ့လေး ဘာလေးနဲ့. ဘယ်သူက ချစ်တယ် ပြောနေလို့လဲ”
သစ်ပင်ကြီးက သူ့တစ်ပင်လုံးကို သွက်သွက်ခါအောင် လုပ်ပြီး ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်လိုက်သတဲ့…
“ဟတ်ဟတ်ဟတ်… မင်းငါ့ကို ညာနေတယ်. မင်းကိုငါချစ်သလို ငါ့ကိုလည်း မင်းချစ်တယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်. ဟုတ်တယ်မလား”
ငှက်ကလေးလည်း မျက်နှာ ပြန်ညှိုးသွားခဲ့ရင်းက ခပ်တိုးတိုးလေး ပြန်ဖြေသတဲ့.
“ကြည့်. ဘာလို့ ဟိုစကားကိုကျတော့ ရှောင်နေရတာလဲ. ထပ်မေးမယ်. ချစ်လား”
ငှက်ကလေးလည်း သစ်ပင်ကြီးကို ခပ်တွေတွေလေး စိုက်ကြည့်ရင်းက.
“ချစ်လို့မရတာကို နားလည်ပါ. ပိုနားလည်အောင် ပြောရရင်တော့ ချစ်ခွင့် မရှိလို့ပါ သစ်ပင်ကြီးရယ်…”
“အို… ငါမင်းကို နှိပ်စက်နေမိပြီလားဟင်… ခွင့်လွှတ်ပါကွာ..”
“ရပါတယ်. သစ်ပင်ကြီးရယ်. ငါဒီမှာ နေခွင့်ရတုန်းလေး ငါ့ကို ပျော်အောင်လုပ်ပေးပါနော်. ငါသိပ်စိတ်ညစ်နေခဲ့လို့ပါ.”
သစ်ပင်ကြီးလည်း ဘာမှ ဆက်မမေးတော့ဘဲ ငှက်ကလေးကို ညင်ညင်သာသာလေး ထွေးပွေ့ထားလိုက်တော့ သတဲ့..
အဲဒီ့ညက ငှက်ကလေး ပထမဦးဆုံးအကြိမ် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မောကျခဲ့တယ်လို့ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ သစ်ပင်ကြီးကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်.
ငှက်ကလေး ဘာမှ ဆက်မပြောနိုင်သေးခင် သစ်ပင်ကြီးက အလုအယက် ဆက်ပြောသတဲ့..
“မင်းကို ချစ်သူလို့ ခေါ်ခွင့်ပေးပါကွာ. ငါ ဘာမှ မင်းဆီက မတောင်းဆိုပါဘူး. တောင်းလည်း မတောင်းဆိုခဲ့ဖူးတာ မင်းအသိပါ. ငါ့ရင်ထဲမှာ မင်းအတွက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အချစ်တွေကို ဒီစကားလုံးလေးတွေထဲမှာ ထည့်သွင်းခွင့်တော့ ပြုပါ. ငါဘာမှ ဆက်မကြိုးစားပါဘူး”
သစ်ပင်ကြီးလည်း ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့.
“ငါ့မှာ ကြိုးစားပိုင်ခွင့် ရှိလို့လား”
ငှက်ကလေးလည်း မရယ်ချင့် ရယ်ချင်နဲ့ ညှစ်ရယ်လိုက်ရင်းက သစ်ပင်ကြီးကို မကြည့်ဘဲ ပြောပါတယ်.
“ငါသိပါတယ်. ထားပါကွာ. မင်းနဲ့ ငါနေလို့ရသလောက် ချစ်သွားမယ်. ဘာမှ အရောင်မပါတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ပေါ့.”
သစ်ပင်ကြီးက သူ့ရင်ဘတ်ကို ကော့လို့ ပြန်ဖြေသတဲ့..
“ပလေတိုးနစ် အချစ်လို့ ခေါ်ကြတယ်.”
“အဲဒါ ဘယ်လိုအချစ်မျိုးလဲ. ဆရာပလေတိုးက လေဒီပလေတိုးကို ချစ်တဲ့ အချစ်မျိုးလား.”
သစ်ပင်ကြီးက သဘောကျစွာ ရယ်ပါတယ်.
“ဟတ်ဟတ်ဟတ်. မင်းကလေ သိပ်နောက်တတ်တယ်နော်.”
ငှက်ကလေးက သစ်ပင်ကြီးကို ခပ်ဆွေးဆွေးလေး စိုက်ကြည့်ရင်းက
“မင်းသိလား သစ်ပင်ကြီး… ငါလေ မင်းရဲ့ ရယ်သံကို သိပ်မြတ်နိုးတာပဲ.”
“မာနသံပါတယ်. ဒါပေမယ့် သိမ်မွေ့တယ်. နူးညံ့တယ်.”
“ဟုတ်တယ်. ငါသိတယ်. ဒါပေမယ့် တကယ်ကိုလည်း ငါ့ရင်ထဲမှာ အဲလိုခံစားနေရလို့ ပြောလိုက်တာ. မင်းမှာ မာနတွေ ရှိတယ်. ဒါပေမယ့် လူမမြင်အောင် မင်းဖုံးကွယ်ထားလို့ နူးညံ့ချင်ယောင် ဆောင်နေတယ်.”
သစ်ပင်ကြီးက သူ့ဆံပင်ကို တစ်ချက်ခါ (အဲ) သူ့သစ်ကိုင်းကို တစ်ချက် ပုတ်ထုတ်လိုက်ရင်းက..
“မင်း ဘာကြောင့် ပြောနိုင်တာလဲ.”
“ငါသိလို့ သိတယ်လို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါကွာ. ဘာကြောင့်လို့ အတိအကျတော့ မပြောချင်ဘူး.”
သစ်ပင်ကြီးလည်း သက်ပြင်းရှည်ကြီးကို ချလိုက်ရင်းက…
“ငါလည်း ငါ့အကြောင်းတွေ ပြောပြချင်ပါတယ်. တစ်နေ့နေ့ပေါ့.”
သစ်ပင်ကြီးလည်း ငှက်ကလေးကို စချင်နောက်ချင်လာတာကြောင့်
“ငါအသက် (၆၀) ပြည့်တဲ့နေ့”
ငှက်ကလေးလည်း သစ်ပင်ကြီးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ အိပ်နေရာကနေ ထခုန်လိုက်ပြီးတော့ လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးလို့ (အဲ မဟုတ်ပါဘူး) အတောင်ပံတွေကို တဖြန်းဖြန်း ရိုက်လို့ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်ပါတယ်.
Posted By Yan4Comments
တို့ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိစေဖို့...
ကိုမျိုးမြင့်အောင်ဆိုတဲ့ မျိုးချစ်မြန်မာဘလော့ဂါ တစ်ဦးက သူ့ရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေ တင်ပေးထားပါတယ်.
ဒီနေရာမှာ သွားရောက်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးမျှဝေလိုက်ပါတယ်.
ခုလိုမျိုး စုစည်းပေးထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကိုမျိုးမြင့်အောင်ရေ…
ရှင်သန်နေတဲ့ မော်ကွန်းများ (သို့) သမိုင်းထဲက ရက်စွဲများ...
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဂရုမစိုက်နိုင်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သမိုင်းထဲက ရက်စွဲများ ဘလော့ဂ်လေးကို ပြန်လည် အသက်သွင်းပါမယ်.
ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း အဲဒီ့ဘလော့ဂ်လေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသွားပါမယ်.
ပါဝင်ရေးသားလိုသူ မည်သူမဆို လှိုက်လှဲပျူငှာစွာ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်.
aungyan@gmail.com ကို ဖြစ်စေ၊ သမိုင်းထဲက ရက်စွဲများရဲ့ ဆီဘောက်စ်လေးထဲမှာပဲ ဖြစ်စေ မက်ဆေ့ခ်ျ (သို့) အီးမေးလ် လိပ်စာလေး ချန်ထားခဲ့ပေးနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ…
အဲဒီ့ဘလော့ဂ်လေးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သိချင်ရင်တော့ ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်.
နိုင်ငံတော်အတွက် ကျရာတာဝန်ကို ထမ်းရွက်လိုသူ မည်သူမဆို မိမိတို့ရဲ့ ဥာဏ်စွမ်း၊ ပညာစွမ်း၊ ကလောင်စွမ်းဖြင့် မေ့လျော့တိမ်မြုပ်လုဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာ့သမိုင်းထဲက ရက်စွဲလေးများ အကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ထိန်းသိမ်း နှိုးဆော်လိုက်ကြရအောင်လားဗျာ…
မကြာခင်မှာ ပြည်ထောင်စုနေ့နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ ကျရောက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်. ဒါ့ကြောင့် ပို့စ်အသစ်လေးတွေကို ကြိုဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ.
ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ ထူးခြားတဲ့ နေ့ရက် နှစ်ခု ရှိပါတယ်.
တစ်ခုကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၂) ရက် ပြည်ထောင်စုနေ့ပါ.
နောက်တစ်ခုကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၃) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ အမျိုးသားဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မွေးနေ့ (၀ါ) ကလေးများနေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်.
အဲဒီ့နေ့ရက်လေးတွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဘလော့ဂ်များမှာ တင်ပြနိုင်ဖို့ မျိုးချစ်ဘလော့ဂါ ကိုမင်းမင်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကို ဒီလိုလေး လုပ်ထားပေးပါတယ်. ကုဒ်ဒင်းလေးတွေကို ရယူပြီး မိမိတို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးတွေမှာ ကိုယ်စီကိုယ်ငှဖော်ပြပေးထားခြင်းအားဖြင့် မေ့လျော့အောင် အလုပ်ခံထားရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မွေးနေ့ကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ…
ကျေးဇူးဗျာ… ရှေ့ဆက်ပြီး ခြေလှမ်းသစ်တွေ လှမ်းနိုင်ပါစေ…
ဗိုလ်ချုပ်မရှိပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲမှာ ရှိနေဆဲ
ကုဒ်ဒင်းကို ဒီမှာ ရယူပါ.
<div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">ဗိုလ်ချုပ်မရှိပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲမှာ ရှိနေဆဲ</span></span>
</span><div style="text-align: center;"><span class = caption><div style="text-align: center;"><img style="border: 0px solid rgb(221, 221, 221); padding: 0px;" src="http://www.fileden.com/files/2007/5/4/1045960/Bogyoke-Bday.png"/></div></span class></div>
</span><div style="text-align: center;"><span class = caption><span style="font-size:85%;"> <a href="http://hteinkmin.myanmarbloggers.org/search/label/%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%84%E1%80%AC">ဤနေရာမှ</a> ရယူပါ</span>
<div style="text-align: center;">**************</div></span class></div>
ညနေခင်း၏ အေးချမ်းသော ရင်ခွင်တွင် သစ်ပင်ငယ်တို့ ယိမ်းထိုးနေကြ၏။ လေပြည် အသုတ်တွင် သစ်ရွက်ဝါတို့ လွင့်မျော ကခုန်နေကြ၏။ အိပ်တန်းတက်ရန် ပြင်ဆင်နေကြသော ငှက်ငယ်လေးတို့၏ စိုးစီစိုးစီ အသံလေးများ ဟိုမှဒီမှ ကြားနေရ၏။ နှင်းမကျသော်လည်း ခပ်မှန်မှန်တိုက်ခတ်နေသော ဆောင်းလေပြည်ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်သည် အနည်းငယ် အေးစိမ့်စိမ့်ဖြစ်နေ၏။
ငြီးစီစီဖြစ်နေသော စိတ်ကူးတို့ကို ချွေးသိပ်အပန်းပြေစေရန် မြစ်ကမ်းဘေးဖက်သို့ လမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့မိသည်။
တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ စီးဆင်းနေသော Hudson မြစ်ကြီးသည် သူ၏ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့သော ခွန်အားများကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်စွမ်း ရှိသူ ဖြစ်သည်။
သူ့ဘ၀တွင် အခက်အခဲများစွာ ရှိခဲ့ဖူးသည်။ တတ်နိုင်သလောက် သူ ကြိုးစားဖြေရှင်းခဲ့သည်ချည်းသာ။ ရံဖန်ရံခါတွင်တော့ လောကကြီးထဲက ထွက်ပြေးချင်စိတ်များပင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ဖူးသည်။
ထိုအချိန်များတွင် သူလုပ်တတ်သည့် အလေ့အကျင့်တစ်ခုမှာ ရေရှိသည့် နေရာတစ်နေရာတွင် ထိုင်လျက် စိတ်ကူးများကို လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းခွင့် ပေးခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
တည်ငြိမ်သောရေပြင်ကျယ်သည် သူ့စိတ်ထဲတွင် ဘောင်ဘင်ခတ်နေသော အတွေးများကို ငြိမ်သက်စေနိုင်စွမ်း ရှိသူဖြစ်သည်။ ရိုက်ခတ်နေသော လှိုင်းလုံးများသည် သူ့နှလုံးသားထဲတွင် လျော့နည်းသွားသော ဘ၀မာန်မာနများကို ပြန်လည်ရှင်သန်စေနိုင်စွမ်း ရှိသူဖြစ်သည်။
ယခု Hudson မြစ်ကမ်းဘေးနားတွင် သူ ငြိမ်သက်စွာ ထိုင်နေမိခဲ့ပြန်ချေပြီ….
စိတ်ကူးတို့ အတိတ်တစ်ချိန်သုိ့ ပျံ့လွင့်သွားခဲ့၏….
ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ မဖြေမီ တစ်ရက်အလို….
မိထ္ထီလာမြို့လေး တစ်မြို့လုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသကဲ့သို့ ခံစားရ၏။ နောက်တစ်နေ့တွင် ဖြေဆိုရမည့် စာမေးပွဲအတွက် ရင်ခုန်နေကြသည်ထင့်. မြို့ထဲတွင်လည်း လူသူသိပ်မတွေ့ရချေ။ ထိုနေ့က သူ စက်ဘီးတစ်စီးဖြင့် နဂါးရုံဘုရားသို့ ထွက်ခဲ့သည်။ ဘုရားတွင် ပုတီးစိပ်၊ တရားထိုင်၊ မေတ္တာပို့ပြီးနောက် ရွှေမြင်တင် ဘုရားဖက်သို့ စက်ဘီး ပြန်စီးလာခဲ့သည်။
ရွှေမြင်တင်ဘုရားဖက်သို့ မရောက်ခင် တံတားပေါ်တွင် သူ့စက်ဘီးကို ထိုးရပ်လိုက်ခဲ့သည်။ ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ စက်ဘီးကို ဆွဲတင်လျက် ကျောက်ထိုင်ခုံလေးဘေးနားတွင် သူထိုင်လိုက်ခဲ့သည်။
နေလုံးနီနီသည် မိတ္တီလာ ကန်တော်ကြီးအပေါ်သို့ ဖြာကျနေသည်။
“ကြိုးကြာမသောက် ရေမနောက် မပေါက်ရွှေကြာ မထိလာ” ဟူသည့် စကားပုံအတိုင်း မိတ္ထီလာကန်တော်ကြီးတွင် ထူးခြားချက် သုံးခုရှိသည်။
၈၈ အရေးတော်ပုံဖြစ်စဉ်က မိတ္ထီလာကန်တော်ကြီးတွင် ကြာပင်များပေါက်နေခဲ့သည်ဟု တစ်ဆင့်စကားပြန်ကြားခဲ့ရဖူးသည်။ ယခုသူ့ရှေ့တွင် မြင်နေရသော ကန်တော်ကြီးသည်ကား ငြိမ်းချမ်းစွာ၊ ခန့်ညားစွာ၊ တည်ငြိမ်စွာဖြင့် လောကကြီး၏ ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုကို ဂုဏ်ယူစွာ ရယူထားခဲ့လေသည်။
ကန်ရေပြင်ကို စိုက်ကြည့်နေခဲ့ရင်းက သူ့စိတ်အစဉ်သည် အတားအဆီးမဲ့စွာ လွင့်မျောသွားခဲ့လေသည်…
တစ်ချိန်က ဒီနေရာ ဒီဒေသမှာ သူသိပ်ချစ်ခဲ့ရသော ဖခင်ကြီး ကျင်လည်ဖြတ်သန်းခဲ့ရဖူးသည်…
ဒီနေရာတွင် သူ့ဖခင် ထိုင်ခဲ့ချင်မှ ထိုင်ခဲ့ပေမည်။ သို့သော် ဒီဒေသတွင် ရှိခဲ့ဖူးသည်မှာတော့ သေချာသည်။
မျက်စိအစုံကိုမှိတ်လျက် ဖခင်ကြီး၏ ၀ိညာဉ်ကို တိုးညှင်းစွာ ဖိတ်ခေါ်နေခဲ့မိသည်။
“မနက်ဖြန်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကြီးကို ဖြေရတော့မယ်.
အဖေသာ ဒီလောကကြီးထဲမှာ ရှိနေခဲ့ရင် ကျွန်တော့်အတွက် စိုးရိမ်နေမလား.
ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့်ကိုခေါ်ပြီး သားအဖနှစ်ယောက် ပျော်ရွှင်စွာ စားသောက်ကြ၊ စကားပြောနေကြမလား.
အခု ကျွန်တော်အဖေ့ကို အရမ်းသတိရနေတယ်.
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာ ခဏလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လာထိုင်ပေးနေပါ အဖေ.
ကျွန်တော်မနက်ဖြန်အတွက် ခွန်အားတွေကို အဖေ့ဆီက နည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ် ရယူခွင့်ပြုပါ….”
မှိတ်ထားသော မျက်စိအစုံထဲမှ မျက်ရည်တို့ အတားအဆီးမဲ့စွာ စီးဆင်းကျလာခဲ့သည်။ ခြေထောက်ကို ခုံပေါ်တင်လျက် လက်နှစ်ဖက်ကို ဒူးတုပ်ထိုင်ကာ သူ့မေးစေ့ကို လက်ပေါ်သို့ တင်ထားခဲ့ရင်းက ကျလာသောမျက်ရည်တို့ကို အင်္ကျီလက်ရှည်ဖြင့် မသိမသာ သုတ်လိုက်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်ကို All D အမြဲထွက်စေချင်ခဲ့သူ၊ လူပေါ်ကလူတစ်ယောက်ဖြစ်စေချင်ခဲ့သူ၊ ပညာဆီမီး ထိန်ထိန်ငြီးစေချင်ခဲ့သူ၊ မိသားစုအတွက် ဂုဏ်ယူစေချင်ခဲ့သူ၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် အဓိကကျသောနေရာမှ ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးခဲ့သူ…
ကျွန်တော်အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားမှာပါ. ဒါပေမယ့် အဖေမရှိတဲ့ အခိုက်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်တွေကို အဖေသိအောင် ဘယ်လိုပြောပြရမှာလဲ.
ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်နေတာကို ကျွန်တော်ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မသိခဲ့ပါဘူး. အမေကလည်း ကျွန်တော် ဆရာမဆီ စာသွားမေးတယ်လို့ပဲ ထင်နေခဲ့တာလေ. တကယ်တော့ ကျွန်တော် အဖေ့ကို သတိရလွန်းလို့ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ထွက်လာခဲ့တာပါ အဖေရယ်…
စစ်တွေမှာ နေတုန်းက ကျွန်တော်တစ်ယောက် ရွယ်တူရခိုင်လူငယ်လေးတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်. ထိုးကြကြိတ်ကြ၊ အဖူးဖူးအရောင်ရောင် ဖြစ်လာတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ရင်း အမေက ရန်မဖြစ်ဖို့ ပြောတယ်. အစ်မက “ငါ့မောင်ကို ဒီလိုလုပ်ရကောင်းလား” ဆိုပြီး စိတ်တိုတယ်. အစ်ကိုကတော့ ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူလေ. အဖေက ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲ…
“ကိုယ့်ကို အနိုင်လာကျင့်လို့ကတော့ ချသာချ ငါ့သား. မခံနဲ့. တစ်ချက်ရရ နှစ်ချက်ရရ ပြန်သာထိုး” တဲ့.
နောက်တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော် ကရာတေးသင်တန်း တက်ဖို့ အဖေကိုယ်တိုင် စီစဉ်ပေးခဲ့တယ်နော်…
ကျောင်းမှာလည်း ကျွန်တော်တစ်ယောက် ရန်ဖြစ်လို့ ရုံးခန်းကို ခဏခဏရောက်တယ်. အဖေကျွန်တော့်ဖက်က အမြဲရပ်တည်ပေးခဲ့တယ်. အဖေ့ထက် ရာထူးကြီးတဲ့ အရာရှိတစ်ယောက်ရဲ့ သားနဲ့ ကျွန်တော်ရန်ဖြစ်တော့လည်း အဖေ ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘဲ ကျွန်တော့်အတွက် ကျောင်းမှာ လိုက်ဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်.
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ အားငယ်စိတ် တစိုးတစဉ်းမျှ မဖြစ်ပေါ်ရအောင် အဖေ ကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တယ်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကျွန်တော့်ကို ပညာပြည့်ဝအောင် သွန်သင်ဆုံးမခဲ့တယ်.
“ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိမှ လောကကြီးမှာ အောင်မြင်မယ်”… တဲ့
၆ တန်းနှစ်မှာ ကျွန်တော် စာတွေ တော်တော်လေး ဖတ်မိနေခဲ့ပြီ. ငွေဥဒေါင်းရဲ့ ဗုဒ္ဓစာပန်းချီကို ဖတ်မိရင်း ကျွန်တော်တစ်ယောက် ကဗျာတိုလေးတစ်ပုဒ်ကို အမှတ်မထင် စပ်ခဲ့မိတယ်.
အမေဈေးတွက်တဲ့ စာရွက်လေးရဲ့ နောက်မှာပေါ့.
ညဖက် ထမင်းစားနေရင်း အဲဒီ့စာရွက်လေးကို အမေတွေ့သွားခဲ့ပြီး အဖေ့ကို ပြတော့ အဖေရယ်လေ….
“ငါ့သားကတော့ကွာ. ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ ကဗျာတွေတောင် စပ်တတ်နေပြီပဲ. ကြီးလာရင်တော့ ဘာမှကို ပြောစရာ မလိုတော့ဘူး” တဲ့…
ကျွန်တော်လေ အဖေ့ရဲ့ အဲဒီ့စကားတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတွေ ပိုပြည့်ဝသွားခဲ့တယ်…
အဖေ့မှာ ထမင်းစား ကြွေပန်းကန်ပြားကြီးတစ်ချပ်ရှိတယ်နော်. အဲဒီ့ပန်းကန်ကြီးကို အဖေအရမ်းကြိုက်လွန်းလို့ သေသေချာချာ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့တယ်. အမေက နို့ဆီဗူးကို ပုရွက်ဆိတ်မတက်အောင်ဆိုပြီး ပန်းကန်အလယ်မှာ ထားလို့ ပန်းကန်ကြီးကို ရေဖြည့်ထားခဲ့တယ်.
ကျွန်တော်က နို့ဆီသိပ်ကြိုက်တာလေ… ကျောင်းကပြန်ရောက်တော့ နို့ဆီဗူးကို ဘယ်သူမှ မသိအောင် ခိုးစားခဲ့တယ်. နို့ဆီဗူးကို မြှောက်လိုက်တဲ့ တခဏမှာပဲ ဗူးအဖုံးက ချောင်နေတော့ ကျွန်တော့်လက်ထဲကနေ နုိ့ဆီဗူး လွတ်ကျသွားခဲ့တယ်.
ကျွန်တော်လေ ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတော့ဘူး…
ကွဲသွားတဲ့ ပန်းကန်ပြားကြီးကို ကြည့်ရင်း ကျွန်တော်မျက်ရည်တွေ ကျလာခဲ့မိတယ်.
ကျွန်တော်အဖေ့ကိုချစ်သလို ကြောက်လည်းကြောက်တယ် အဖေ. အဖေက သိပ်အရိုက်ကြမ်းတာကိုး…
အမေလည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး. ကျွန်တော့်ကိုလည်း ဆူတာတော့ဆူတာပေါ့. ဒါပေမယ့် ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး…
ရုံးကအပြန် အိမ်ပေါ်ကို လှမ်းတက်လာတဲ့ အဖေ့ခြေသံတစ်ချက်တိုင်းမှာ ကျွန်တော်ကျဆုံးနေခဲ့ရတယ်.
ကွဲနေတဲ့ပန်းကန်ကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်၊ အမေ့မျက်နှာကို ခပ်တင်းတင်း တစ်ချက်ကြည့်လိုက်၊ အခန်းထောင့်မှာ ကုပ်ကုပ်လေးရပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်ရင်းက အဖေက ပြောတယ်.
“ပန်းကန်ကွဲတွေ လွှင့်ပစ်လိုက်လေ. ကလေးတွေ စူးကုန်ဦးမယ်” တဲ့…
ကျွန်တော့်ကို လှမ်းကြည့်ရင်း အဖေက တစ်ခွန်းပဲ ပြောတယ်.
“စားချင်ရင် လူကြီးတွေကို ပြောစား. ခိုးစားတာ အဖေမကြိုက်ဘူး” တဲ့…
ချောင်ပိတ်မိနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို အနိုင်မယူတတ်တဲ့ အဖေ့ရဲ့ မေတ္တာနဲ့ ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းကို ကျွန်တော်လေးစားပါတယ် အဖေ…
အဲဒီ့အရည်အချင်းတွေကို အဖေ့ဆီက ကျွန်တော်အမွေဆက်ခံနိုင်အောင်လည်း ကျွန်တော်ကြိုးစားနေဆဲပါ…
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးစားချင်စိတ်ပေါ်လာအောင် အမြဲပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့သူဟာလည်း အဖေပါပဲ.
ဒုတိယတန်းမှာ ကျွန်တော့်ကို မက်လုံးတစ်ခုပေးခဲ့တယ်. ကျောင်းမှာ အဆင့် (၁) ကနေ (၃)အတွင်းဝင်ရင် မင်းလိုချင်တာ ၀ယ်ပေးမယ်တဲ့.
ကျွန်တော် တတိယ ရခဲ့တယ် အဖေ.
ဆုယူပြီး နောက်တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော်အိပ်ယာက နိုးလာခဲ့တော့ အဖေ့ကို မတွေ့ရဘူး. ရုံးပိတ်ရက်ဆိုပေမယ့် အဖေက တစ်ခြားတာဝန်တွေလည်း ရှိတတ်သေးတာမို့ သိပ်သတိမထားမိခဲ့ပါဘူးလေ.
မနက်စာ စားပြီး ခဏနေတော့ အစ်မက အိမ်ရှေ့ကနေ လှမ်းခေါ်ပါတယ်.
“ဟေ့. ဟိုမှာ အဖေပြန်လာပြီ. လက်ထဲမှာ ဘာကြီးလဲမသိဘူး ကိုင်လာတယ်. လာကြည့်လှည့်” တဲ့.
ကျွန်တော်လည်း အူယားဖားယား ပြေးပြီး သွားကြည့်ခဲ့တယ်. ငါးထပ်တိုက် ၀ရန်တာပေါ်ကနေ “အဖေ့” လို့ အသံကုန်ခြစ်ပြီး အော်လိုက်တော့ အဖေတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြီး မော့ကြည့်တယ်. လက်ထဲက ဗူးကြီးကိုလည်း မြှောက်ပြတယ်.
“အိုးးးးးးးးးးး… ဓာတ်ခဲနဲ့မောင်းတဲ့ ရထားတွဲလေးပဲ”
ကျွန်တော်ရယ်လေ… အိမ်ပေါ်ထပ်ကနေ အောက်ကို ဘယ်လိုဘယ်လို ရောက်သွားမှန်းကို မသိခဲ့တော့ပါဘူး.
အဖေ့လက်ကို ဆွဲလို့ အိမ်ပေါ်ကို ပြန်တက်လာတော့ အစ်မရော၊ အမေရောက တံခါးဝမှာ ဆီးကြိုနေကြတယ်.
အစ်ကိုကတော့ ကျွန်တော့်လက်ထဲက ဗူးကြီးကို ကြည့်ရင်း ရယ်ပြနေခဲ့တယ်လေ… အစ်ကိုက အဖေနဲ့ လိုက်သွားခဲ့တာဆိုတော့ သိနေတာပေါ့…
အထွေအထူး ပြောနေစရာ မလိုပါဘူးလေ… အဖေ၀ယ်ပေးခဲ့တဲ့ ဓာတ်ခဲရထားလေးကို ကျွန်တော်အရမ်းမြတ်နိုးတာပဲ. ဓာတ်ခဲကုန်လွန်းလို့ အချိန်နဲ့ ကစားဖို့ ပြောရတဲ့အထိ ကျွန်တော် နှစ်သက်ခဲ့တာပါ အဖေ.
စတုတ္ထတန်းမှာ ကျွန်တော် မြို့နယ် တတိယဆု ထပ်ရတယ်. အဲဒီ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက် စစ်တွေမှာ ရောက်နေခဲ့ပြီလေ. ရန်ကုန်ကို အစည်းအဝေးသွားတက်ပြီး ပြန်လာတော့ အဖေက ကျွန်တော့်ကို ပြောတယ်.
“ငါ့သားအတွက် ဆုယူလာခဲ့တယ်” တဲ့…
လေယာဉ်ကွင်းကနေ အိမ်ကို ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း အဖေ့အိတ်ကို ဖွင့်ကြည့်လို့ မွှေနှောက်ရှာခဲ့မိတယ်.
တစ်ခုက ကျောင်းကနေ ပေးလိုက်တဲ့ ထမင်းဗူးလေး..
နောက်တစ်ခုကတော့ အဖေ၀ယ်ပေးတဲ့ သံလိုက်ကွန်ပါဗူးလေး….
ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အထဲမှာ ချွန်စက်လေးနဲ့ ခဲတံလေး သုံးချောင်းက အဆင်သင့်.
အဖေကလည်း ချက်ကောင်းကို စောင့်နေခဲ့တယ်နဲ့ တူပါတယ်.
ကျွန်တော့်ပုခုံးကို တစ်ချက် ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ရင်းက
“ငါ့သား ကြိုးစားလို့ကတော့ အဖေက ငါ့သားလိုချင်တာတွေ ၀ယ်ပေးနေမှာပဲ” တဲ့…
ဟုတ်တယ်. ကျွန်တော် သံလိုက်ကွန်ပါဗူးလေး တစ်ဗူးရဖို့ ပူဆာနေခဲ့တာ ကြာပြီလေ. ကျွန်တော်တောင် မေ့တေ့တေ့ ဖြစ်နေခဲ့ပြီ. အဖေက ကျွန်တော့်ကို တကယ် ဂရုစိုက်တာပဲနော်…
ကျောင်းမှာ ဘာပြိုင်ပွဲပဲ လုပ်လုပ် ၀င်ပြိုင်အောင် အဖေက အမြဲပြောတယ်. ကျွန်တော်ကလည်း ၀င်တာပဲ.
စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွေဆိုရင် ကျွန်တော်အမြဲဝင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်. ရယ်တော့ရယ်ရတယ်လေ. ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲစ၀င်တုန်းက ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို့ ကြိုတင် ရေးထားပြီးသား စာစီစာကုံးကို အလွတ်ကျက်ပြီး သွားပြိုင်ခဲ့ဖူးတယ်. လေးတန်းနှစ်ကပေါ့.
ပြိုင်ပွဲခန်းမထဲ ရောက်တော့ ကျက်ထားတာကို နည်းနည်း ပြုပြင်ပြီး ရေးလိုက်တယ်. ခေါင်းစဉ်က “လွတ်လပ်ရေးနေ့ တို့မမေ့” တဲ့…
ကျွန်တော် နှစ်သိမ့်ဆု ရခဲ့တယ် အဖေ. အဖေတစ်ယောက် ဂုဏ်ယူနေခဲ့တာ ကျွန်တော်သိတာပေါ့. ကျောင်းတွေအများကြီး ၀င်ပြိုင်တဲ့ပွဲမှာ ဆုရအောင် ပြိုင်နိုင်လို့တဲ့..
ခုနစ်တန်းနှစ်မှာ ကုလသမဂ္ဂနေ့ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲ လုပ်တယ်. အဲဒီ့နေ့က စက်ဘီးပျက်နေလို့ ကျောင်းကို အချိန်မီ မသွားနိုင်ခဲ့ဘူး. ပြိုင်ပွဲကျင်းပချိန်ထက် နာရီဝက်လောက် နောက်ကျပြီး ရောက်သွားခဲ့တယ်. ရောက်ရောက်ချင်းပဲ ပုဆိုးကို မလို့ ပြိုင်ပွဲလုပ်နေတဲ့ အခန်းထဲကို ပြေးသွားခဲ့တယ်.
မောနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဆရာမက တစ်ချက်မျက်စောင်းထိုးပြီး ခုံတစ်နေရာ လုပ်ပေးခဲ့တယ်. ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်လို့ ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တဲ့ စာစီစာကုံးထဲက အချက်အလက်တွေကို နေရာတကျ ပြန်စီရင်း ခွင့်ပြုချိန် နှစ်နာရီအတွင်းမှာ ပြီးအောင်ရေးခဲ့တယ်. နာရီဝက်နောက်ကျသွားခဲ့တာ ကျွန်တော့်အတွက် ပူပင်စရာတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်လေ.
အဲဒီ့ပြိုင်ပွဲအတွက် ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲမှာ ဘာမှ မမျှော်လင့်ထားခဲ့ဘူး.
နောက် နှစ်ပတ်လောက်အကြာမှာ ဆရာမတစ်ယောက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စာသင်ခန်းမှာ လာအော်တယ်.
“ရန်အောင်. ဆရာကြီးရုံးခန်းကို လာခဲ့ပါ” တဲ့…
ကျွန်တော့်ကို တစ်ခန်းလုံးက ၀ိုင်းကြည့်ကြတယ်. ကျွန်တော်လည်း ကြောင်နေတယ်လေ. ရန်မဖြစ်တာတောင် ကြာပြီ. ဘာလို့ခေါ်ပါလဲလို့ပေါ့.
ဆရာမကတော့ ကျွန်တော့်ကို ပြုံးကြည့်နေလေရဲ့…
ဆရာကြီး အခန်းထဲကိုရောက်တော့ ကျွန်တော်မသိတဲ့ အတန်းကြီးသမားတွေကိုလည်း တွေ့ရတယ်. အားလုံးလက်ပိုက်ပြီး တန်းစီရပ်နေကြတယ်. ကျွန်တော်ကတော့ အငယ်ဆုံးလို ဖြစ်နေလေရဲ့. နောက်ဆုံးမှလည်း ရောက်လာသူမို့ လက်ပိုက်ပြီး ရပ်နေလိုက်တယ်.
“မင်းတို့တွေ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရတယ်. ဒီတစ်ပတ် စနေနေ့မှာ ဆုပေးပွဲလုပ်မယ်. မိဘတွေကို ပြောပြီး ဆုပေးပွဲလာခဲ့ကြပါ” တဲ့…
ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ လက်ထဲကို ဖိတ်စာတစ်စောင်စီ ထည့်ပေးပါတယ်.
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အဖေ့လက်ထဲကို အဲဒီ့ဖိတ်စာလေး ထည့်ပေးလိုက်တယ်. အဖေကတော့ ကျွန်တော့်ကို ပြုံးကြည့်နေခဲ့ရင်းက အမေ့ကို လှည့်ပြောပါတယ်.
“တိုက်ပုံအင်္ကျီ မီးပူတိုက်ပြီးပြီလား” တဲ့…
ဆုပေးပွဲနေ့မှာ ကျွန်တော် ဘာဆုရမှန်းကို မသိခဲ့သေးပါဘူး… ပထမလား. ဒုတိယလား. တတိယလား ပေါ့….
ဒုတိယဆု ကြေငြာတော့လည်း ကျွန်တော့်နာမည် မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး
နှစ်သိမ့်ဆု ငါးဆု ကြေငြာတော့မှ ကျွန်တော်ဆုတက်ယူခွင့် ရခဲ့တယ်.
ကျွန်တော် ရှက်လိုက်တာ… ဒီလိုမျိုး နှစ်သိမ့်ဆုလောက်သာ ရခဲ့မယ်ဆိုရင် အဖေ့ကို မခေါ်လာခဲ့ပါဘူး.
အဖေကတော့ ကျွန်တော့် မျက်နှာညှိုးသွားတာကို မြင်လို့လားမသိ. ကျွန်တော့်လက်မောင်းကို အသာညှစ်လို့ အားပေးပါတယ်.
“ငါ့သားက နှစ်သိမ့်ဆု ငါးဆုထဲမှာတောင် ပထမဆုံး နာမည် အခေါ်ခံရတာပဲ. အဲဒါ နာရီဝက်လောက် နောက်ကျသွားလို့. မဟုတ်ရင် ပထမရမှာ သေချာတယ်.” တဲ့.
ကျွန်တော်နဲ့ အဖေနဲ့ အဲဒီ့နေ့က အခမ်းအနား စာတမ်းကြီးကို နောက်ခံထားလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြတယ်. တိုက်ပုံအင်္ကျီနဲ့ ရခိုင်လုံချည်နဲ့ ခြေထောက်ကို တင်ပျဉ်ခွေချိတ်လို့ ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံခဲ့တဲ့ အဖေ့ကို ကျွန်တော် ဒီနေ့အထိမှတ်မိနေခဲ့သေးတယ်.
ကျွန်တော့်ကို အမြဲအားပေးနေခဲ့တာ ကျေးဇူးပါ အဖေ…
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ရလာတဲ့ ဆုကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ ဖွင့်ကြည့်ခဲ့မိတယ်.
UNDP စာတမ်းပါတဲ့ အဖြူရောင် တီရှပ်အင်္ကျီ အကြီးကြီးပဲ… အဖေ၀တ်ကြည့်တယ်. အဖေနဲ့တောင် ကြီးနေတာ တွေ့ရတယ်.
ဒါပေမယ့် အဖေက ခပ်နောက်နောက်ပြောပါတယ်.
ချောင်ချောင်ချိချိ ၀တ်ရတာပေါ့တဲ့… ငါ့သားဆုရတဲ့ အင်္ကျီဝတ်ရတာ ၀တ်နေရင်းနဲ့တောင် ဂုဏ်ယူတယ်တဲ့…
ကျွန်တော် အဲဒီ့တုန်းက အဖေ့ကို ကြည့်နေရင်း တစ်ချက်တွေးလိုက်မိတယ်. နောက်တစ်ခါဆိုရင် ငါ ပထမနေရာရအောင် ကြိုးစားမယ်လို့…
ကျွန်တော် ခုနစ်တန်းနှစ်မှာ အဖေ ဆုံးသွားခဲ့တယ်. ကလေးမကျ လူကြီးမကျ အခြေအနေမှာ ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက် လမ်းညွှန်ကောင်းတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာ ကျွန်တော့်အတွက် ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ် အဖေ.
နောက်တစ်ခု ကျွန်တော်မှတ်မိနေတာက အဖေဆုံးသွားတော့ ၀တ်ထားတဲ့ အင်္ကျီလေးက ကျွန်တော် ဆုရခဲ့တဲ့ တီရှပ်အင်္ကျီပွပွကြီးလေ…
အဖေ ဘ၀ကူးသွားခဲ့တာတောင် ကျွန်တော့်ကို ချစ်မြတ်နိုးမှုတွေ ပြသခဲ့လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
နေရာအနှံ့ကျင်လည် ဖြတ်သန်းနေခဲ့ရင်းက အဖေ့ရဲ ဆွေမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ ဒီမြို့လေးကို ပြောင်းလာခဲ့မိတယ်.
အမေထင်ခဲ့သလို အမျိုးတွေက ကျွန်တော်တို့ မိသားစုကို ဖေးမကူညီတာ မရှိခဲ့ပါဘူး အဖေရယ်. အကူအညီလာတောင်းတယ်လို့ ထင်သလို၊ ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်တော့ လက်ဝါးလာဖြန့်တယ်လို့ ထင်တဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ဆက်ဆံခဲ့တယ်.
အမေဒီကို ပြောင်းလာခဲ့တဲ့အတွက် အရမ်းမှန်သွားခဲ့တယ်.
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မခံချင်စိတ်တွေ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းထိ မြောက်တက်သွားခဲ့လို့ပဲ.
အခု ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ မြင်နေရတဲ့ မိတ္ထီလာ ကန်တော်ကြီးကို စိုက်ကြည့်နေရင်းက ကျွန်တော်တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်ခဲ့မိပါတယ်.
“ကျွန်တော် All D ရအောင် ကြိုးစားမယ် အဖေ… အဖေ ကျွန်တော့်ကို ဘာဝယ်ပေးမှာလဲ ဟင်”
တစ်စုံတစ်ရာကို ကြားလိုက်ရသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်လိုက်မိခဲ့သည်...
မြန်မာစာ မဖြေခင်ညက ကျွန်တော် မြန်မာစာကို လုံးဝမကျက်ခဲ့ဘူး အဖေ.
အဲဒီ့အစား ကျွန်တော် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ကျင်းပတဲ့ မင်္ဂလာမောင်မယ် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုရခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံ ၃၀၀ ကျပ်ထဲက ဖဲ့ပြီး ၀ယ်ထားတဲ့ စကားပုံစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကို အလွတ်ကျက်နေခဲ့တယ်.
မြန်မာစာမှာ ဂုဏ်ထူးထွက်ဖို့က စာစီစာကုံးကောင်းဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်တဲ့…
အမေက စာမကျက်ဘူးလား မေးတယ်.
ကျွန်တော်ကလည်း ရင်ကော့လို့ ပြန်ဖြေခဲ့တယ်.
အဲဒီ့ညက မှတ်မှတ်ရရ တီဗွီကလာတဲ့ စက်ရုပ်ကားတစ်ကားကိုတောင် ပြီးတဲ့ အထိကြည့်လိုက်ခဲ့သေးတယ်.
နောက်တစ်နေ့ စာမေးပွဲခန်းထဲမှာ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ခန့်မှန်းထားတဲ့ စာစီစာကုံးခေါင်းစဉ်နဲ့တိုးတယ်.
ကျက်မှတ်ထားတဲ့ စကားပုံလေးတွေကို နေရာတကျ ထည့်သုံးရင်းက ကျွန်တော်သိနေခဲ့တယ်.
ငါ မြန်မာစာ ဂုဏ်ထူးထွက်ပြီလို့….
စာမေးပွဲ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစု မန္တလေးကို ပြောင်းသွားခဲ့တယ်. မန္တလေးမှာ ရှိနေတုန်း ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို စတင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ် အဖေ. အရမ်းရှက်တတ်၊ လူကြောက်တတ်တဲ့ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကောင်းစွာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရင်းက ထက်မြက်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုကို မွေးမြူပျိုးထောင်နိုင်ခဲ့တယ်.
စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းထွက်တော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဆီကနေ တစ်ဆင့် သတင်းကြားရပါတယ်.
ကျွန်တော် လေးဘာသာ ဂုဏ်ထူးထွက်တယ်တဲ့…
ကျွန်တော် ၀မ်းသာသလို ၀မ်းနည်းသွားခဲ့တယ်.
တကယ်ဆို ငါးဘာသာလုံး ဂုဏ်ထူးထွက်ခဲ့သင့်တာလေ…
အဖေ့ရဲ့ ဆန္ဒကို မလိုက်လျောနိုင်ခဲ့လို့ စိတ်မကောင်းဘူး. အမေနဲ့ အစ်မတွေကတော့ ပျော်နေကြတာပေါ့. ကျူရှင်မယူခဲ့တဲ့ ဘာသာတွေကိုပါ ဂုဏ်ထူးထွက်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့လို့ ဘာသာစုံ ကျူရှင်ယူတဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ကတောင် ချီးကျူးကြပါတယ်. နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာက ကျွန်တော် အမှတ်အများဆုံးနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာပါပဲ…
အဲဒီ့ညက အဖေ့ကို ကျွန်တော်အိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်.
အဖေက ကျွန်တော့်ကို ပြိုင်ဘီးလေးတစ်ဘီး လက်ဆောင်ဝယ်ပေးခဲ့တယ် လို့ ကျွန်တော်အိပ်မက်မက်ခဲ့တယ် အဖေ…
ရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေ ထွက်ခွာတော့ ကျွန်တော်ဟာ အရမ်းကို ပျော်နေခဲ့တဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်လိုပဲတဲ့…. လေဆိပ်မှာ လေယာဉ်ပေါ်မတက်ခင်ထိ ကိုင်ထားတဲ့ ဖိုင်တွဲအနီလေးကို မြှောက်ရင်းမြှောက်ရင်း လက်လှမ်းပြနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်နေကြတဲ့ နှုတ်ဆက်သူတွေက ပြောတယ်တဲ့…
ဟိုကောင်လေးပဲ ကောင်းတယ်. တော်တော်ပျော်နေပုံပဲတဲ့. လက်ကလည်း ပြနေတာ မညောင်းနိုင်ဘူး တဲ့…
သူတို့ဘေးနားမှာ ရပ်နေတဲ့ အမေ ငိုနေရင်းက ချောင်းတဟွတ်ဟွတ် ဆိုးမိတယ် လို့ အစ်မက ပြန်ပြောပြတယ်.
လေယာဉ်ကြီး ကောင်းကင်ထဲကို ထိုးတက်သွားတော့ အမေ မိုက်ခနဲ တစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့…
သူတို့လည်း ဘယ်လိုခံစားလိုက်ရမှန်း မသိဘူးတဲ့…
ခါးပတ်တွေ ဖြုတ်လို့ရတော့ ကျွန်တော် အိမ်သာထဲကို သွားခဲ့ပါတယ်. အိမ်သာထဲမှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက် လေယာဉ်ပျံကြီးရဲ့ စက်သံကို အခွင့်ကောင်းယူလို့ ငိုရှိုက်နေခဲ့မိတယ်.
ကျွန်တော် အိမ်နဲ့ခွဲခွာပြီး ရပ်ဝေးကို တစ်ခါမှ မသွားခဲ့ဖူးတာ အဖေ သိပါတယ်လေ…
ရန်ကုန်နယ်နိမိတ်ကို ကျော်သွားတော့ လေယာဉ်ပေါ်ကနေ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေက အဖေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစု ရန်ကုန်ကနေ စစ်တွေကို ပြောင်းသွားတော့ လေယာဉ်စီးတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို သွားသတိရစေခဲ့တယ်.
လေယာဉ်ပေါ်ကနေ မြင်ရတဲ့ ဦးထိပ်ချွန်ချွန် အရာလေးတစ်ခုကို ကြည့်ရင်းက ကျွန်တော် လွှတ်ခနဲ အော်လိုက်ခဲ့တာ အဖေမှတ်မိသေးလား…
“ဟိုးမှာ မြင်းမိုရ်တောင်ကြီး မြင်းမိုရ်တောင်ကြီး… ” တဲ့…
အဖေက ကျွန်တော်ပြတဲ့နေရာကို ကြည့်ရင်း တဟားဟား အော်ရယ်ပါတယ်. လေယာဉ်ပေါ်ပါလာတဲ့ ခရီးသည်တွေကလည်း ကျွန်တော်ပြတဲ့နေရာကို ကြည့်ကြရင်း ကျွန်တော့်ကို ချစ်မြတ်နိုးစွာ ရယ်ပြကြပါတယ်.
ဘာသာရေးစာပေတွေ ဖတ်နေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တစ်ယောက် သိထားခဲ့တာက လေယာဉ်ပျံကြီးနဲ့ သွားရင်တော့ မြင်းမိုရ်တောင်ကို မြင်ကောင်းမြင်ရနိုင်တယ်လို့လေ…
အဖေက ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေကို ထိုးဖွရင်း ပြောခဲ့ပါသေးတယ်.
“မြင်းမိုရ်တောင်က လေယာဉ်ပျံထက် ပိုမြင့်တယ်. အဲဒါ သဘောင်္ပါ” တဲ့…
သေသေချာချာ ပြန်ကြည့်တော့မှ ရွက်သင်္ဘောတစ်စီးကို အပေါ်ကနေ မြင်နေရတာ ဖြစ်နေတယ်လေ.
ခု ကျွန်တော် လေယာဉ်ပေါ်က မြင်နေရတဲ့ တိမ်စိုင်တွေရဲ့ အပေါ်ခပ်လှမ်းလှမ်းကို လှမ်းမျှော်ကြည့်ခဲ့မိတယ်.
ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေပါ အဖေ…
ကျွန်တော် မြင်းမိုရ်တောင်ကြီးကို တွေ့လိုက်ရတယ်….
ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀တလျှောက်မှာ ကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ် ကျရှုံးခဲ့ရဖူးသလို ကျရှုံးခဲ့တိုင်း အဖေ့ရဲ့ စကားတစ်ခွန်းနဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘ၀ကို ပြန်လည်မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့တယ်.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်နေဆဲပါ အဖေ…
ဟိုတစ်လောက အမေတို့နဲ့ စကားပြောဖြစ်ခဲ့တယ်. အစ်မက မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာ ပါတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆောင်းပါးကို အိမ်ကိုလာတဲ့ လူတိုင်းကို လိုက်ပြရတာ အမောပဲတဲ့. အမေကလည်း ဖတ်တာတော့ ဖတ်တယ်. နားမလည်ပေမယ့် ကောင်းတာတွေ ရေးထားမှန်းတော့ သိတယ်တဲ့.
“မင်းက ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို စာတွေ ရေးတတ်လာရတာလဲ” တဲ့.
ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ . ကျွန်တော်ကတော့ “ဟတ်ဟတ်ဟတ်” နဲ့ ရယ်နေမိခဲ့တယ်…
“သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ရင် မောင်လေးအကြောင်း ပြောဖြစ်တယ်” တဲ့
“ငါ့မောင်လေးက ကျောင်းတက်နေရင်းနဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ပို့ပြီး မိသားစုကို ထောက်နေတာ” တဲ့.
“ငါ့မောင်လေးက …. နိုင်ငံမှာ” တဲ့.
“ငါ့မောင်က ဘလော့ဂါ” တဲ့
ကျွန်တော် ၀မ်းသာပါတယ်. ဂုဏ်ယူပါတယ်.
၀မ်းနည်းတာတစ်ခုကတော့ အဖေ့ကို ကျွန်တော် ရေးသားတဲ့ စာတွေ၊ ကဗျာတွေ ပြသခွင့်မရှိတော့တာ၊ ကျွန်တော့် ချွေးနှဲစာနဲ့ လုပ်ကိုင်လို့ ရလာတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ အဖေ့ကို ကျေးဇူးဆပ်ခွင့် မကြုံကြိုက်နိုင်တော့တာ၊ ဘယ်သူမှ မထင်ထားတဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ကျွန်တော် အရယူပြနိုင်ခဲ့တော့ အဖေ့ကို ကျွန်တော်လိုချင်တာ ပူဆာခွင့် မရနိုင်ခဲ့တာ…
အဲဒါတွေအတွက် ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းမိတယ် အဖေ…
အဖေဖြစ်စေချင်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေကို ကျွန်တော်အကောင်အထည်ဖော်နေဆဲပါ…
လက်ရှိအချိန်မှာ ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ နိမ့်ကျချိန်တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းနေရတယ်.
ကျွန်တော့်ကို မချစ်မနှစ်သက်သူတွေရဲ့ စကားလုံးတွေအောက်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေ ပွန်းပဲ့နေရတယ်.
စိတ်ဓာတ်တွေ ယိုင်လဲလုဖြစ်သွားခဲ့ရတာတွေနဲ့လည်း ကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတယ်.
လူသားဆန်စွာ ၀မ်းနည်းမယ်. ငိုကြွေးမယ်.
လူသားဆန်စွာနဲ့ပဲ ထူထောင်မယ်. ဦးမော့မယ်. အဖေ…
အဖေ ဘယ်တော့မှ စိတ်မပျက်စေရပါဘူး….
အဖေက ကျွန်တော့်ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ အမြဲရှင်သန်နေတဲ့ အမြုတေတစ်ခုပါ….
ညနေခင်း၏ ရောင်ခြည်လက်တံတို့ ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့ကြလေပြီ.
ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် မြင်နေရသော လွတ်မြောက်ရေး ရုပ်တုကြီးကို ကြည့်ရင်းက အံကို တင်းတင်းကြိတ်မိသည်။ လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်မိသည်။ အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း တစ်ချက် ရှူရှိုက်မိသည်။ ဆံပင်ကို ဆတ်ခနဲ တစ်ချက်ခါထုတ်လိုက်တော့ မျက်ဝန်းထောင့်မှ မျက်ရည်စတစ်ချို့ မြစ်ထဲသို့ လွင့်စင်ကျသွားခဲ့သည်။
လှိုင်းလုံးတစ်လုံးက ၀ုန်းခနဲ ကမ်းစပ်သို့ရိုက်ခတ်သည်။ စင်ရော်တစ်ကောင်က အသံကိုမြှင့်လျက် ကြွေးကြော်သည်။ မီးပြတိုက်မှ မီးရောင်တစ်ခု သူ့ဖက်သို့ လက်ခနဲ ဖြာကျသည်။
အင်္ကျီကို ဇစ်ဆွဲစေ့လျက် မတ်တပ်ရပ်လိုက်ခဲ့သည်။ ရေပြင်ကျယ်ကို စိုက်ကြည့်နေခဲ့ရင်း အသက်ကို မှန်အောင် ရှူနေခဲ့သည်။ မျက်စိအစုံကို ခေတ္တမှေးမှိတ်လျက် ခန္ဒာကိုယ်တွင် တင်းမာနေသော အကြောအခြင်များကို ဦးခေါင်းမှ ခြေဖျားအထိ သတိထားပြီး ဖြေလျှော့လိုက်သည်။
မြစ်ထဲတွင် ခုတ်မောင်းသွားသော သင်္ဘောတစ်စင်းဆီမှ ဥဩသံရှည်တစ်ချက်ကို ကြားလိုက်ရသည်..
ကောင်းကင်သို့ တစ်ချက်မော့ကြည့်ရင်းက စကားလုံးများကို ဖြေးညှင်းပြတ်သားစွာ သူရေရွတ်လိုက်ခဲ့သည်…
“ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှင်သန်ယုံကြည်နေဆဲပဲ အဖေ…”
ဂျက်ကတ်အင်္ကျီထဲမှ Mp3 Player လေးကို ထုတ်လိုက်ရင်း နားထောင်သင့်သည့် သီချင်းတစ်ပုဒ် ကို ရွေးချယ်လိုက်သည်။
နားကြပ်ကို တပ်လျက် မြစ်ကမ်းဘေးမှ သူထွက်ခွာလာတော့ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှ သစ်ပင်တို့က သူ့ကို ဦးညွှတ်လျက် ကောင်းချီးဩဘာပေးနေကြသည်ကို ခံစားလိုက်ရသည်…
ဇန်န၀ါရီ (၂)ရက်နေ့တွင် ဆုံးပါးကွယ်လွန်သွားခဲ့သော ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီးအား ဂုဏ်ပြုရေးဖွဲ့ပါသည်...
လမ်းလျှောက်တတ်သောသစ်ပင်နှင့် အတောင်ပံမရှိသော တေးသီ...
ပြည်ထောင်စုအရေးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအပေါ် ဖဒိုမန...
ရှင်သန်နေတဲ့ မော်ကွန်းများ (သို့) သမိုင်းထဲက ရက်စဲ...
Free Nay Phone Latt